Glossary Forex | FXCC
Nkwupụta Nkwupụta Akaụntụ
Otu akụkọ nkwupụta akaụntụ FXCC na-egosi niile azụmahịa emere na akaụntụ azụmaahịa ruo oge. Ọmụmaatụ; ọ bụla ahịa (iwu) onye ahịa na-ewe / abanye na ahịa, ụgwọ nke usoro ọ bụla, nkwụnye ego na oge ụfọdụ na ntụgharị nguzozi mgbe arụmọrụ ọ bụla na akaụntụ ahụ gụrụ.
Ihe dị mkpa nke akaụntụ onye ahịa, nke a na-agụnye ngụkọta ziri ezi (ọnụ ọgụgụ nke ego ntinye / fọdụrụ na akaụntụ ahụ) na mgbanwe ọ bụla site na: uru na ọnwụ site na nkwụsị na njedebe ọnọdụ, ụgwọ na ụgwọ site na rollovers kwa ụbọchị, tinyere ebubo site na ọrụ dịka: ụlọ ọrụ, nyefe ego, ma ọ bụ ụgwọ ego metụtara ụlọ akụ, ma ọ bụrụ na ụgwọ ndị ahụ nwere ike ịdaba.
Ụkpụrụ ọnụego mgbanwe ọnụego nke ụlọ akụ etiti. Ego ego obodo ahụ bụ "pegged" (edozi) na nnukwu ego (ego dị ike, dị ka US dollar ma ọ bụ Euro). Ihe ngosi na nso nso a bu ugwo nke franc Switzerland na euro. E nwere ike gbanwee mkpọ ahụ, n'ozuzu dị ka mmụba nke asọmpi mba ahụ n'ahịa mbupụ.
ADX; nkezi directional index
Atumatu Ntughari Ntughari Akwukwo (ADX) bu ihe atumatu ahia iji me ka ike nke ndi mmadu na-eme site n'inwe ugwo ugwo na ndu. ADX bụ akụkụ nke usoro nlekọta Directional Movement nke J. Welles Wilder bipụtara na nke a na-esite n'aka ndị na-egosi Directional Movement.
Nke a na - ejikọta Njikọ Ndị Ahịa FXCC. Ndị ahịa niile ga-agụ ma kweta usoro azụmahịa site na ịbanye (electronically ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa) FXCC Agreement Customer, tupu ịmepe akaụntụ na FXCC.
FXCC trading platform.
Usoro mmemme ngwa - API
Nke a bụ interface na-enyere usoro ngwanrọ aka iji nkwurịta okwu na mmemme ngwanrọ ndị ọzọ. N'izo aka banyere trading trading, API na-ezo aka na ntanetị, na-eme ka ikpo okwu jikọọ na ahịa Forex. API nwere mmepe mmepe na-enye ohere ịkọ ozi, dị ka: ezigbo oge ịkọ ọnụahịa ego na iwu azụmahịa / igbu egbu.
Ọnụ ego nke ego na-abawanye, ma ọ bụ na-ewusi elu, na nzaghachi maka mmepe akụ na ụba na n'ihi ahịa ahịa.
Ọ bụ okwu a na-eji mgbe ndị ahịa ahia na-ere ma zụta otu ego (ma ọ bụ ihe ọnụ) n'otu oge iji nweta uru site na ọnụahịa ma ọ bụ / na mmegharị ego.
Ọnụahịa nke ego, ma ọ bụ ngwá ọrụ na-enye maka ire ere FXCC, ma ọ bụ ihe oriri ọzọ. Ịjụ ma ọ bụ nye ọnụahịa bụ ihe dị mma ọnụahịa onye ahịa ga-ekwu mgbe ọ na-agbalị ịzụta ma ọ bụ ogologo oge.
Ezi ọ bụla nke nwere uru nkwado dị mkpa.
ATR; ọnụ ọgụgụ zuru oke
Ngosipụta nke ezigbo oge (ATR) na-agbaso oge nke oge ahụ n'okpuru nchọpụta, na-echeba ọdịiche ọ bụla site na njedebe nke azụ ahịa mbụ.
Onye na-ere ahịa nabatara na akara / ụda ọhụụ nke mba ụwa, maka ụzọ AUD / USD.
Nke a bụ onye nke atọ nke onye ahịa na-enye ikike iji nweta ikike, ma ọ bụ na-enye ikike ịchịkwa akaụntụ onye ahịa. FXCC adịghị, site na itinye ya ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, kwado ma ọ bụ kwado usoro ọrụ nke onye nnọchiteanya nwere ikike. N'ihi ya, FXCC anaghị anabata ọrụ ọ bụla nke onye uwe ojii ahụ.
Nchekwa onwe - ahia
Nke a bụ usoro aghụghọ nke eji usoro, ma ọ bụ usoro ihe omume, na-akpọkarị ndị ọkachamara ọkachamara ma ọ bụ EA, ma ọ bụ na onye ahịa na-etinye aka na iwu ha n'ahịa site na ntaneti ha. A na-ebute iwu ịzụta ma ọ bụ ịre ahịa n'ahịa site n'usoro ihe omume ahụ nke a ga-egbu mgbe oge mmemme nke onye ahịa ahụ na-ezute.
Onu ogugu onu ogugu oge
Ọ na-anọchi anya ego ole a na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ kwa awa maka otu ọnwa.
FXCC Back Office department na-emekọ ntọala akaụntụ, ego na-enyefe na akaụntụ onye ahịa, nsogbu nke ahia, ajụjụ ndị ahịa na ihe ọ bụla ọzọ na-emekarị banyere ọrụ nke na-agụnyeghi azụmaahịa, ma ọ bụ ire nke ụzọ ego.
Ọ bụ usoro ebe a na-anwale usoro aghụghọ ahia site na iji data akụkọ ihe mere eme iji gosi na usoro ahia nwere ike ịdaba, iji zere izere ahịa nke isi obodo.
Nkwụnye ụgwọ nke ịkwụ ụgwọ
Ọ bụ nkwupụta nke na-achikota ọdịiche dị na ọnụ ahịa zuru oke n'etiti ịkwụ ụgwọ na ma site na mba maka oge akọwapụtara. A makwaara ya dị ka nguzozi nke ịkwụ ụgwọ mba ma ọ bụrụ na ọ na-ejikọta azụmahịa n'etiti ndị bi na mba na ndị bi na mba.
Ego Ịzụ ahịa, ma ọ bụ Balance Trade
Ọ bụ ọdịiche dị n'etiti mbubata mba na mbupụ ya maka otu oge. Ọ bụkwa akụkụ kachasị mkpa nke akaụntụ mba dị ugbu a. N'ọnọdụ na obodo na-ebupụta oke dị elu karịa mbubata ya, mgbe ahụ mba ahụ nwere nkwụsị ahịa, ma ọzọ, ọ bụrụ na mba dị na njedebe ahia ahia (ụkọ ahịa), ego ahụ na ndị mmekọ ahịa ya ga-ada, ma ọ bụ daa mbà, na-eme ka ọnụ ahịa nke mbubata dị ọnụ ala ma na-ebịpụta dị ọnụ ala karịa ndị ahịa.
Ọ bụ nzukọ ego zuru ụwa ọnụ nke na-akwalite nkwado nke ụlọ akụ etiti na nzube nke ịkwado nkwụsi ike na ịkọ ozi n'etiti ọnụ ụlọ etiti mba ụwa. Ebumnuche ọzọ bụ ịbụ isi ihe dị mkpa maka nchọpụta akụ na ụba.
Edebere dịka akara nke ụgwọ ụlọ akụ nyere onye ahịa, a na-akpọkarị ya "akara".
Ụbọchị Banking (ma ọ bụ ụbọchị azụmahịa)
Ụbọchị azụmaahịa bụ ụbọchị azụmahịa nke ụlọ akụ. Ọ na-agụnye ụbọchị niile mgbe emeghere ụlọ ọrụ akụ maka azụmahịa maka ọha mmadụ, ebe azụmahịa na-agụnye ọrụ ego niile. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ụbọchị izu ụka, Saturday na ezumike iwu kwadoro.
Isi ụlọ akụ Japan.
Enwere ike iji ha mee ihe dịka ego ma ọ bụ akwụkwọ nke ụlọ akụ etiti nyere site n'ụdị ihe eji eme ihe (akwụkwọ nkwado), nke a ga-akwụ onye na-akwụ ụgwọ.
Ọnụ ego ọnụahịa
Ọ bụ ụtụ mmasị na-adabere na nke ụlọ akụ etiti na-etinye ego ya n'aka ụlọ akụ na ụlọ ya.
A na-akpọ nke a dị ka akpa ego na ụzọ ego. Ụgwọ ego bụ isi ego nke onye na-enye ego (onye na-enye ego), na-edebe akwụkwọ ndekọ ya. Na ahịa FX, a na-ewere na US Dollar dị ka ego isi ego maka ọnụ ọgụgụ FX kachasị; E gosipụtara ọnụego dị ka unit nke $ 1 USD, tinyere ego ọzọ e depụtara na ụzọ abụọ ahụ. Ndị ọzọ na mgbakọ a bụ: British Pound, Euro na Dollar Australian.
Ọnụ ọgụgụ dị elu bụ mmasị ọnụego nke ụlọ akụ etiti ahụ, dịka Bank of England ma ọ bụ Federal Reserve, ga-akwụ ụgwọ ịgbazinye ego nye ụlọ akụ azụmahịa. Ndị na-agbazinye ego dị mma ga-akwụ ụgwọ dị ntakịrị karịa ọnụ ọgụgụ ntọala, ndị na-agbaziri ndị na-abaghị uru ga-akwụ ụgwọ dị elu, karịa ọnụ ọgụgụ ntọala.
Otu pasent nke otu percent. Ọmụmaatụ; ihe dị iche n'etiti 3.75% na 3.76%.
Ọnụahịa ahụ egosipụtara na nkwụghachi ụgwọ kwa afọ nke nloghachi ma ọ bụ n'ihe gbasara mkpụrụ tozuru okè karịa ọnụahịa maka ego.
Ịgba ahịa bụ ọnọdụ ahịa ma ọ bụrụ na e nwere oge na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka otu ngwaahịa ego.
Mgbanwe na ọnọdụ ahịa ebe ndị na-achụ ego na / ma ọ bụ ndị ahịa, bụ ndị dị mkpụmkpụ n'ihe ngwaahịa ego, aghaghị ịzụtaghachi ego na ego dị elu karịa ka ha rere ya, ma ọ bụghị na ọnọdụ ala ahịa na-arị elu ga-eme ka ha ghara ịnwụ akaụntụ, ma ọ bụ ahịa ha / s. Mkpịsị na-agba agba nwere ike ịbụ mmemme mba zuru ụwa ọnụ nke e kere n'ahịa ndị na-ere ahịa, nke na-abụkarị site na ụlọ akụ etiti ma ọ bụ ndị na-ere ahịa.
Onye na-etinye ego nke na-ekwere na ọnụahịa nke ngwa ahia ga-ada.
Agba aja aja Book
Akwụkwọ Beige bụ aha a na-ejikarị eme maka akụkọ Fed, nke e bipụtara tupu nzukọ FOMC ezute na ọnụego mmasị. A na-enweta ya na asatọ (8) ugboro asatọ n'afọ.
Ọnụ ọnụ ahịa
Ọnụahịa nke FXCC (ma ọ bụ ihe ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme njem) na-enye ịzụta ego ndị ahịa site n'aka onye ahịa. Ọ bụ ọnụ ahịa a ga-ekwu maka onye ahịa mgbe ọ chọrọ ire (obere) ọnọdụ.
Mee / jụọ Ịgbasaa
Ihe dị iche n'etiti nkwekọrịta ma jụọ ego.
Na-egosi na ọ bụ ihe abụọ ma ọ bụ atọ atọ nke ụgwọ ego. Ọmụmaatụ; EUR / USD ọnụego mgbanwe nke .9630 pụtara '0' dị ka nke mbụ. Ya mere ụgwọ a ga-abụ 0.9630, ya na "nnukwu ihe" bụ 0.96.
Ngosipụta akaebe nke na-eme ka ụda olu, nke John Bollinger dere. Ha na-enye nkọwa nke onye dị elu na nke dị ala, ebe anyị nwere ike ịhụ ọnụahịa dị elu na ìgwè elu ma dị ala na ìgwè ndị dị ala.
Na-agbaji, ma ọ bụ gbapụ
Nkwụsị bụ okwu eji kọwaa na mberede, ngwa ngwa (ma ọ bụ ịda) na ọnụahịa nke ngwá ọrụ na-eduga nkwụsịtụ site na ọkwa nkwado ma ọ bụ nkwụsị.
Bretton Woods Agreement nke 1944
Nke a bụ ọkwa 'nkwekọrịta WWII nke mere ka ọnụego mgbanwe gbanwee ma setịpụ ọlaedo. E mere nkwekọrịta ahụ n'etiti ndị nnọchiteanya si mba dị iche iche nwere onwe ha - mba ndị na-anọchite anya akụnụba ndị dị mkpa n'ụwa.
Otu onye ọrụ, dịka FXCC, na-eme iwu iji zụta ma na-ere ngwaahịa ego, dịka: ego na ngwá ọrụ ndị ọzọ metụtara ya, ma ọ bụ maka ọrụ, ma ọ bụ uru na agbasa.
Ụlọ Ewu (Ụlọ)
Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ iwu ọhụụ ọhụrụ a kwadoro site n'aka gọọmenti ma ọ bụ ndị ọzọ na-achịkwa iwu tupu usoro iwu ahụ enwee ike ịmalite iwu.
Ogologo oge nke ịrị elu ahịa maka otu ngwaahịa ego.
Onye na-etinye ego nke na-ekwere na ọnụ ahịa nke ngwaahịa na-akpata ego ga-ebili.
Ụlọ akụ Central Germany.
Kwa ụbọchị mgbe ụlọ ahịa na-emeghe maka azụmahịa, ma e wezụga Saturday ma ọ bụ Sọnde, na isi ụlọ ọrụ ego na mba.
Otu iwu na-agụnye ntụziaka pụrụ iche iji mezuo azụmahịa ịzụta ihe onwunwe na ọnụahịa ma ọ bụ dị ala. Agaghị arụ ọrụ ruo mgbe ahịa ahịa dị na (ma ọ bụ dị ala) ọnụahịa ego. Ịkwụ ụgwọ ikike ịzụta ihe ọ na-arụ ozugbo, na-aghọ ahịa ka ịzụta na ahịa ahịa ugbu a.
Ịzụta ịkwụsị bụ nkwụsịtụ nke a na-etinye n'elu ọnụọgụ ugbu a na-ajụ ego, ọgaghị arụ ọrụ ruo mgbe ahịa ịjụ ego bụ (ma ọ bụ n'elu) ọnụahịa ịkwụsị. Ịkwụsị ịkwụsị iwu ozugbo, ma ọ bụ ahịa ka ịzụta na ahịa ahịa ugbu a.
Nke a bụ okwu a na-eji na ahịa ahia mgbanwe nke USD / GBP.
Ụdị eserese nke nwere ihe mgbagwoju anya ndị yiri uwe oriọna. Ọ na-egosiputa ọnụahịa dị elu na ọnụ ala, yana nke mmeghe na mmechi ahịa.
Ọnụ ego a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ site na akaụntụ maka ijide ụzọ ego ma ọ bụrụ na ọnụego abụọ na-adabaghị uru nke components ahụ dị iche.
N'ihe gbasara azụmahịa Forex, ahia nke a bụ atụmatụ nke onye na-azụ ahịa na-eji ego azụ ego, na-etinye ego n'ime ihe onwunwe nke nwere ike inye nzaghachi dị elu. Usoro a dịkarịsịrị na ahia ahia ahia, mgbe ọnụ ụlọ etiti central na-agba ụgwọ ọnụego.
Nke a bụ otu ụbọchị edozi ọrụ.
N'izo aka na ahia ahia gbanwere n'ụbọchị a kwadoro azụmahịa ahụ.
Ego nkịtị na nkwụnye ego
Nkwụnye ego na nkwụnye ego bụ nke kwekọrọ na ego ole edebere na akaụntụ ahụ, na-atụle ihe ndị ọzọ ma ọ bụ nkwụsị nke njedebe nke mechiri emechi, uru na ọnwụ, yana ụgwọ ndị ọzọ, ma ọ bụ ụgwọ, dị ka rollovers, na ọrụ (ọ bụrụ na ndị ọ bụla bụ ọdabara).
CCI, Comodity Channel Index
The Comodity Channel Index (CCI) na-atụle ọnụahịa dị ugbu a na ahịa na nkezi ọnụahịa a hụrụ n'elu windo nke 20 oge.
Otu ụlọ akụ, nke na-ahụ maka ịchịkwa iwu ego na obodo ma ọ bụ mpaghara. Federal Reserve bụ Central Bank maka United States, European Central Bank bụ Central Bank nke Europe, Bank nke England bụ Central Bank nke England na Bank nke Japan bụ Central Bank nke Japan.
Omume nke ụlọ akụ etiti, ma ọ bụ ụlọ akụ etiti na-abanye ebe ahịa ahịa azụmaahịa iji gbalịsie ike imepụta ngwa ngwa na ọchịchọ, site na ịzụta (ma ọ bụ ire) azụmaahịa mba ọzọ.
The Commodity Futures Trading Commission, nke a bụ US Federal regulatory agency maka ọdịnihu na-ere ahịa na ahịa ahịa, gụnyere oge ego.
Ọ bụ okwu eji mee mgbe ọnụahịa dị n'etiti etiti abụọ (nkwado na nkwụsi ike) maka oge ụfọdụ.
A na-ele nke a anya dị ka onye na-enyocha ihe ọmụma na eserese nke akụkọ ihe mere eme, iji gbalịa chọpụta usoro, ma ọ bụ usoro nke ịzụ ahịa ego, nke ga-enye aka ịkọwa ntụziaka na ọdịda nke otu ngwaahịa ego. Ọ bụ otu ụdị nke onye nyocha nke nyocha.
CHF bụ mkpesa nke franc Switzerland, ego Switzerland na Liechtenstein. A na-akpọ franc Switzerland dịka "Swissie" site n'aka ndị ahịa ego.
Ego a kwadoro
Ego ole enwere, nke sitere na nhazi nke ahia, ma obu ahia.
Onye ahịa ma ọ bụ Onye Ahịa
Onye njikwa njikwa FXCC. Onye ahịa, ma ọ bụ onye na-ejide akaụntụ nwere ike ịbụ: onye, ​​onye njikwa ego, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, akaụntụ ntụkwasị obi, ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro na uru na arụmọrụ nke akaụntụ ahụ.
Ọnọdụ nke mechibidoro
Ọnọdụ nke mechibidoro na-ezo aka n'ọkwá ahụ nke na-adịkwaghị dị ka onye ahịa ahụ si na-aga ahịa na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụta ego na arụmọrụ, a ga-ejikọta ọnọdụ ahịa ahụ.
Ụgwọ nke onye na-ere ahịa dị ka FXCC nwere ike ịkwado ụgwọ ọ bụla.
Enwere uzo ato abuo nke gunyere ego site na mba ndi nwere otutu onu ahia. Ahịa abụọ bụ: USD / CAD, USD / AUD, USD / NZD. A na-ejikọta ọnụ abụọ dị mma na mgbanwe nke ahịa ahịa. Ndị ahịa na-achọ inweta mgbasa ozi ahịa na-agbanwe agbanwe, na-achọkarị ịzụ ahịa abụọ a.
Akwukwo, ma obu akwukwo edeputara nke ndi ozo na-achikota akuko nile banyere ahia ego.
Njikọta bụ okwu eji kọwaa oge mgbe ọnụahịa dị ntakịrị ma na-agagharị n'akụkụ.
Consumer Obi Ike
Otu njirimara nke nchekwube nke gbara gburugburu ọnọdụ akụ na ụba na akụ na ụba na ọnọdụ ego nke onwe onye.
A na-akọwa nke a dị ka ihe ọnwa ọ bụla nke ngbanwe dị na ọkwa nkata nke ngwongwo ndị na-azụ ahịa, gụnyere: nri, uwe, na njem. Mba dịgasị iche iche na ụzọ ha ga-esi na-akwụ ụgwọ na ịgbazinye ego.
Ịga n'ihu bụ okwu a na-ejikarị eme ihe mgbe a na-atụ anya na omume ahụ ga-agbatị ya.
Otu nkwekọrịta OTC (Over Counter) kwekọrịtara na FXCC iji zụta ma ọ bụ ree ego a kapịrị ọnụ nke otu ego, maka ego a kapịrị ọnụ nke ego ọzọ, ebe a na-edozi ntọala ahụ ụbọchị ụbọchị (ọ bụ ụbọchị akara). Ọnụ ego mgbanwe mba ọzọ na ndị abụọ ahụ na-eme nkwekọrịta ga-ekpebi ọnụọgụ ego.
Onu ogugu iji jiri ugwo onu ogugu nke ugwo onu ogugu nke ugwo na dollar efu abughi dollar, na njedebe nke ubochi ahia.
Ọnụ ego na-agbanwe agbanwe
A ego nwere ike kpamkpam ahia maka ego ndị ọzọ na-enweghị iwu iwu. A na - ejikọta ha na akụ na - emeghe ma nọgidere na - echekwa ego, a na - ekpebikwa ego ha site n'enyemaka na ego na ahịa ahịa ndị ọzọ.
Ọ bụ ihe na-agagharị agagharị ma a na-eji usoro ahụ kọwaa ihe ọrịre na-eme mgbe a na-agbanwe agbanwe nke omume.
Onye nnọchiteanya nke mba ọzọ, onye na-enye ọrụ maka ụlọ ọrụ ego ọzọ, nke enweghị alaka ụlọ ọrụ ego dị mkpa, dịka ọmụmaatụ; iji kwado nnyefe ego ma ọ bụ ịzụ ahịa azụmahịa.
Ọnụ ego ego
Ego nke abụọ na ụzọ ego. Ọmụmaatụ; na ego ụzọ EUR / USD, ego ego bụ USD.
Onye ọ bụla ma ọ bụ ụlọ akụ na-ekere òkè na mgbanwe ego ụwa ma bụrụ onye na-ede akwụkwọ nke nkwekọrịta dị ka ego.
Ọ na-ezo aka n'ikike nke mba ịmebie ma ọ bụ na-emetụta uru nke ego. Ọnụ ego a na-ere n'usoro n'usoro ịre ahịa kwesịrị ịdị elu karịa ụgwọ ahịa nke ugbu a na-agụnye nyochaa ọnọdụ akụ na ụba, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke obodo nke otu mba, iji chọpụta njedebe zuru ezu ya.
Ịmepụta azụmahịa nke mesịrị mechie ọnọdụ.
A na-akpọkwa nke a dịka "akwa" a na-edozi. A na-akọwa nke a dị ka ọkwa a na-agbaso ọnụego mgbanwe mba dị na, n'ihe gbasara ego ọzọ.
Nkwekọrịta ego nke Cross
Nkwekọrịta ntụsara ahụ ma ọ bụ ịzụta, ma ọ bụ ree otu ego mba ọzọ, iji gbanwere ego ọzọ nke ego ọzọ. Ego a gbanwere abụghị US Dollar.
A ego na-agụnye USD.
Ọnụ ego mgbanwe n'etiti ego abụọ, nke ọ bụla n'ime ha bụ ego ego nke mba ahụ ma ha abụọ gosipụtara na ego nke atọ.
Ịgba akwụkwọ bụ dijitalụ, ego ndị e ji emepụta ego site na iji cryptography maka nchebe nke azụmahịa ahụ. Ebe ọ bụ na ụlọ akụ etiti, ma ọ bụ gọọmenti, ọ na-ekwu na ọ bụ ihe okike, nke na-eme ka ọ ghara ịbịanye aka na nchịkwa, dịka Bitcoin.
Ọ bụ metal ma ọ bụ akwụkwọ, mgbe na-eji ma ọ bụ mgbasa, dị ka a pụtara nke mgbanwe, kpọmkwem na-ekesa banknotes na ego.
A na-ejikarị mee ihe iji belata ihe ize ndụ nke oscillations ego, a na-akpọkwa ya ego nke ego ebe a na-eji ọnụ ọgụgụ dị oke nkata nke nkata tụọ ọnụ ahịa nke ego.
Ọ bụ usoro ihe omume kọmputa nke a na-eji emegharị ego; onye nyocha nke na-agbanwe ego nke otu ego n'ime uru nke ego ọzọ. Ọmụmaatụ; dollar ka euro. Ndị na-atụgharị kwesịrị iji ahịa ndị ahịa kachasị ọhụrụ dị na ahịa ahịa ọzọ.
Nhọrọ ego na-enye onye zụrụ ya ikike, ma ọ bụghị nkwa, iji gbanwere ego a kapịrị ọnụ na otu ego gaa na nke ọzọ na ọnụahịa a kapịrị ọnụ na ụbọchị a kapịrị ọnụ.
Debere dị ka ego abụọ na azụmahịa azụmahịa. The 'EUR / USD' bụ ihe atụ nke ụzọ ego.
Ihe ize ndụ nke mmụba ọjọọ na ọnụego mgbanwe.
Ihe ngosi ego
Ndị a bụ ihe njirimara atọ nke akwụkwọ ozi nke ISO (Òtù mba maka ọkọlọtọ) kere ma jiri ya mee ihe n'ọnọdụ ọnụahịa zuru oke. Dịka ọmụmaatụ: USD, JPY, GBP, EUR, na CHF.
Òtù Ụtụ ego
Ihe kachasị na-ekwu banyere ego ego bụ Eurozone. Ọ bụ nkwekọrịta n'etiti mba abụọ ma ọ bụ karịa iji kenye ego (ma ọ bụ mkpọ) ego, iji nọgide na-enwe ọnụego mgbanwe ha ka ha jiri ego ha na-akwụ ụgwọ na ọkwa. Ndị òtù ahụ na-ekekọrịta otu ego ego na ego ọzọ.
Ngwa Akaụntụ Ndị Ahịa
Usoro nke FXCC nke ndị ahịa niile ga-akwụcha ma nyefee maka nkwenye site na FXCC, tupu azụmahịa enwee ike ime.
Kwa Ụbọchị Kpochapụ (nsochi ụbọchị azụmahịa)
Nke a bụ otu oge na oge, n'oge ụbọchị azụmahịa, na-anọchi anya ụbọchị ahịa ahụ. Ụbọchị ahia nke nkwekọrịta ọ bụla abanye n'ime mgbe a na-ebipụ ya kwa ụbọchị, a na-ewere ya na ọ ga-eme ya n'ụbọchị ahịa ọzọ.
Ịzụta ma ọ bụ ree ka ọ bụrụ na emeghị ya n'ụbọchị ahụ, a ga-ehichapụ ya ozugbo.
Ọ na-ezo aka na ahia a meghere ma mechie n'ime otu ụbọchị ahụ.
Ndị akọwapụtara na ndị ahịa na-ewere ọnọdụ n'ọnọdụ ngwaahịa ego, bụ ndị a na-emezi mmiri tupu ha abanye n'otu ụbọchị ahịa ahụ, akọwapụtara dị ka ndị ahia ụbọchị.
Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ịdebe ihe ndekọ nke azụmahịa niile e mere n'oge a kapịrị ọnụ. Ihe nchikota nke ndi mmadu bu ihe ndi ozo bu ihe omuma di mkpa maka ahia. Onye na-azụ ahịa forex nwere nsogbu nwere ike ịgụnye ozi dịka oghere mmeghe na mmechi ego, nke onye ahịa ahụ bidoro.
Ọ bụ ụbọchị a nabatara azụmahịa ahụ.
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ
Ụlọ ahịa Forex na-emeghe 24 / 5, ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ihe nkedo na ebe dị iche iche. A na-achọtakwa ihe ndozi na-abụghị ahịa ndị ahịa; na ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego, ka ha wee nwee ike igbu ndị ahịa n'ọtụtụ ala. Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, mgbe ha na-ere ahịa dị ka onye ahịa azụmaahịa, na-ejikarị aka ha na-agbasa ma na-agbasa mgbe ha na-enye ndị ahịa ha onyinye, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na-esite n'ụzọ nhazi.
Nke a bụ usoro bụ isi nke ịdekọ ihe ọmụma bụ isi gbasara azụmahịa ọ bụla.
Onye ọ bụla (ma ọ bụ guzosie ike) na-eme dịka onye isi, kama dịka onye ọrụ, na azụmahịa nke mgbanwe mba ọzọ (ịzụta ma ọ bụ ire). Ndị ahịa na-azụ ahịa maka uru nke aka ha, na-erekwa akaụntụ nke ha ma na-etinye onwe ha n'ihe ize ndụ.
A na-akọwa nke a dị ka nkwekọrịta nke nkwekọrịta ego.
Ụdị ahịa na-ezighị ezi.
DEMA, (ọnụọgụ abụọ na-agagharị agafe)
Onye oru nyocha nke oru bu Patrick Mulloy mere ya, uzo ogugu uzo abuo (DEMA) gbaliri inye uzo di elu site n'igota usoro ugwo ngwa ngwa, nke nwere ike inwe obere ala karia ihe di elu karia. Ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya dịkwa mgbagwoju anya karịa nke ọ bụla na-agagharị.
Ọ bụ ọnụ na uru nke ego na-akwụ ụgwọ na ego ndị ọzọ, n'ihi na ndị ahịa.
Omimi nke ahịa
Nke a bụ nha nke oke ma ọ bụ ihe ngosi nke mmiri mmiri maka maka azụmahịa maka (dịka ọmụmaatụ) otu ụzọ ego, n'otu oge kpọmkwem oge.
N'ihe gbasara mmepụta ego, nke a bụ ozi achọrọ iji mechaa azụmahịa azụmahịa, dịka ọmụmaatụ; aha, ọnụego, na ụbọchị.
Nkwụda ụgwọ bụ ọnụahịa ala nke ego mba dị iche iche: ego ọzọ, otu ego, ma ọ bụ dị ka ọkọlọtọ. Nkwụ ụgwọ bụ usoro iwu ego nke mba ndị nwere ọnụego mgbanwe, ma ọ bụ ọnụego mgbanwe ọkara. Ndị gọọmentị na ụlọ akụ etiti na-akwụ ụgwọ ụgwọ. Mba nwere ike igbanye ego ya, dịka ọmụmaatụ, nsogbu ahia ahia.
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ a tụlere dịka ụtụ nke ụtụ isi na mkpebi ọ bụla eji emefu ego.
Divergence nwere ike ịbụ nti ma ọ bụ na-ezighị ezi ma ọ bụ ihe mgbaàmà nke ngbanwe na omume nke ọnụahịa ije.
Deutsche Mark. Ụdị ego mbụ nke Germany tupu ya agbanwee euro.
The Indicators Movement Indicators (DMI) bụ ihe dị iche iche nke usoro njikwa ihe na-eduzi Directional nke e kere ma bipụtara ọtụtụ ndị na-egosi ahịa, J. Welles Wilder. A na-agụta ha na nkwekọrịta nke Middle Directional Movement (ADX). A na-echepụta ihe ngosi abụọ, a Positive DI (+ DI) na Negative DI (-DI).
Ihe oriọna nke na-eme mgbe ọnụahịa na ihe fọrọ nke nta ka ọ hà. Ọ na-anọchi anya nnukwu ihe dị n'etiti nnukwu na ala, ma ọ bụ dị nnọọ warara n'etiti ọnụahịa mmeghe na mmechi ma dị ka obe ma ọ bụ cross cross.
A na-akọwa ọnụego dollar dị ka ọnụego mgbanwe nke otu ego na dollar (USD). Ọtụtụ ọnụego mgbanwe na-eji dollar dị ka ego isi ego na ego ndị ọzọ dị ka ego ego.
A na-akọwa nke a dịka ụtụ mmasị ndị dị na ntinye ego, ma ọ bụ itinye ego na mba ahụ.
Okwu nke ndị nnọchianya FXCC jiri mee ihe iji gosipụta na a kwadoro okwu ọnụ na ugbu a bụ ihe nkwekọrịta.
Eji ya na nyocha nhazi dị ka ụkpụrụ eserese nke nwere ike igosi na ị ga-enwe ike ịme ahịa ahịa n'ọdịnihu
Eji ya mee ihe na nyocha nke ntanetị dị ka ụkpụrụ nhazi nke nwere ike igosi mmeghari ego ọ ga-eme n'ọdịnihu.
Dovish na-ezo aka n'echiche ahụ ma ọ bụ ụda asụsụ a na-eji eme ihe mgbe otu ụlọ akụ etiti dị na-achọ ịkwalite akụ na ụba ma eleghị anya na-eme ihe ike na-eme banyere ikuku.
Ihe Ngwaahịa Kwadoro
Ọ bụ ngosipụta akụ na ụba nke gosipụtara iwu ọhụrụ nke e nyere ndị na-emepụta ụlọ n'ime okwu dị nso. Ọ na-etinye ike nke n'ichepụta ma na-enyere ndị investors aka ịmata ọnọdụ dị n'uto nke akụ na ụba.
Debere dị ka ihe otu ụlọ akụ etiti, tinyere ebumnuche nke ịkwalite ego, na-ebuli akụnụba na-akpali akpali, ma site na ịrị elu ịrị elu ịrị elu.
Nke a bụ kalenda iji nyochaa akara akụ na ụba, metrics, data na akụkọ n'ihi na mba ọ bụla, mpaghara na njikwa onwe onye na-ahụ maka akụ na ụba. Dabere na mmetụta ha nwere na ahịa, a na-ejikarị ụda nke data tụnyere ya; ndị buru amụma na ha nwere mmetụta kasịnụ na-akọwakarị dịka "mmetụta dị elu".
Ihe ngosi akụ na ụba
Achịkọ na-agbaso site n'aka gọọmenti mba, na-egosi na ụba akụnụba dị ugbu a bara uru nye ihe ngosi ahụ.
Mgbanwe Exchange Nri
Ọ bụ ndepụta nke na-akọwa ike nke ego na-adaba na nkata nke ego ndị ọzọ. A pụkwara ịhụ ya dị ka nchịkọta ichikota ihe ndị dị na nkwụsị ahịa ahia nke mba mgbanwe ego ya na ego ndị ọzọ.
Nyefee ego nke Electronic.
EMA, Nhazi Nkezi
Nhazi Nke Na-agafe Ihe (EMA) na-anọchite anya ọnụahịa nke ọnụahịa, na-etinye ọtụtụ mgbakọ na mwepụ na ọnụ ahịa ndị ọzọ. Ịdị arọ nke a na-etinye na ngwaahịa kachasị ọhụrụ na-adabere na oge ahọpụtara nke ọnụọgụgharị nke onye ọrụ ahụ họọrọ. Oge dị mkpirikpi maka EMA, ihe ka njọ na ọnụahịa kachasị ọhụrụ.
Ndekọ Ụgwọ Ọrụ (ECI)
Ngosipụta akụ na ụba nke US nke na-eme ka ọnụọgụ na ịrị elu nke ụgwọ ọrụ na-efu.
Ụbọchị Ọgwụgwụ Ụbọchị (EOD)
A kọwara nke a dịka iwu iji zụta, ma ọ bụ na-ere ngwá ọrụ ego na ọnụahịa a kapịrị ọnụ, iwu ahụ ka na-emeghe ruo mgbe ngwụcha ahịa.
Okporo ụzọ ọ bụla
Debere dịka ọnọdụ nọ na ụlọ ahịa ego Euro Interbank, ma ma ọnụọgụ ma ọnụego maka otu oge, bụ kpọmkwem otu.
Ego Ịkwụ Ụgwọ Electronic
Ịzụ ahịa ego site na ndekọ ụlọ ọrụ ntanetị. Ịkwụ ụgwọ ego nke igwe na-agụnye ntụgharị ego nke isi ego gaa na ego mba ọzọ, na ọnụọgụ ego ahịa dịnụ, site na ndekọ ụlọ ọrụ ntanetị. Site na nkwukọrịta teknụzụ, ọ na-ewetara ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa ọnụ ma na-eji usoro mgbasa ozi igwe na-emepụta ebe ahịa ahịa.
Nke a bụ otu ego mgbanwe nke European Union bloc.
Isi ụlọ akụ nke European Union.
A nkata nke ego ndị EU.
Dika nhazi nke ndi otu ndi European Union, O gunyere nchikota nke atumatu aku na uba na ego, na onodu ego.
A kọwapụtara ya dị ka ego na-azụ ahịa mgbanwe nke na-etinye ego na euro, ma ọ bụ ozugbo, ma ọ bụ site na euro denominated obere oge ụgwọ ego.
Ọnụ ego euro
Nke a bụ ọnụego mmasị ndị e hotara maka ego Euro na oge ụfọdụ.
Eurocurrency bụ ego a na-etinye n'èzí ahịa ya site na gọọmenti ma ọ bụ ụlọ ọrụ mba. Nke a na-emetụta ego ọ bụla na ụlọ akụ dị n'obodo ọ bụla. Dị ka ihe atụ; A na - ekesa South Korea na ụlọ akụ na South Africa, a na - ewere ya dị ka "euro". A makwaara ya dịka "mwepụ."
A na-akọwa Eurodollars dị ka oge nkwụnye ego a tụrụ na dollar US, na ụlọ akụ n'èzí United States, ya mere, ha adịghị n'okpuru ikike nke Federal Reserve. N'ihi ya, nkwụnye ego dị otú ahụ na-erubere iwu dị ala karịa, dịka ọmụmaatụ, nkwụnye ego ndị dị otú ahụ n'ime USA
European Union (EU) bụ otu ìgwè nke 28 mba ndị na-arụ ọrụ dị ka akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Iri iri na ato n'ime mba na-eji euro eme ihe dika ego ego ha. Ejiri 12 mba 1993 guzobe Ahịa European Market, iji rube isi na nnwere onwe isi anọ ahụ; mmeghari nke: ngwongwo, oru, ndi mmadu na ego.
Ngalaba nkwụnye ego karịa
Ego e debere na FXCC nke a na-ejighi maka akụkụ aka na-emeghe ọnọdụ.
N'ihe gbasara mmekọrịta ego, a na-akọwakarị mgbanwe dịka ebe a na-ere ngwá ahịa ma na-ahazi ya. Ihe Nlereanya: New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade.
Usoro nke gọọmenti na ụlọ akụ etiti na-etinye maka ebe ị na-achịkwa ọkụ na njupụta nke mgbanwe na ngwaọrụ ndị ọzọ, ịgụnye: ikikere ọtụtụ ego, ihe ntinye ego, ịre ahịa, njedebe, ụgwọ na ụgwọ.
Mgbanwe ọnụego mgbanwe - ERM
Ụdị mgbanwe ọnụahịa bụ echiche nke njedebe ọnụego mgbanwe ego - usoro eji eme ihe iji chịkwaa mgbanwe ọnụahịa ego maka ego ndị ọzọ. Enwere mgbanwe nke ọnụego mgbanwe ego na oke ókè. A na-akpọkarị usoro ego mgbanwe ego dịka usoro ego ego.
Nkọwapụta mba ọzọ maka obere ego gbanwere ma gbanwere ego. Ego ndi ozo bu ndi ozo na enweghi omuma ahia nke, dika ima euro, ha bu ndi ahia ahia. Ịzụpụta ego ego pụrụ ịba ụba dị ka ọnụego - nchịkọta / rịọ gbasara, bụ nke na-abawanye. Ọ bụghị ngwa ngwa ka a na-ere ahịa (ma ọ bụ dị) na akụkọ njikwa akaụntụ. Ihe omuma nke ego ndi ozo di iche iche tinyere Thai baht na Iraar dinar.
Ọ na-ezo aka n'ihe ize ndụ metụtara mmemme na ahịa ahịa nke nwere ike ibute uru ma ọ bụ ọnwụ.
Ọ bụ akụkọ nke Ụlọ Ọrụ Na-edepụta n'Amerịka nke United States na-enye nkọwa nke ndekọ ọnụahịa nke usoro iwu na-agaghị adịgide adịgide na iwu na-adịgide adịgide na ngwa ngwa, iwu ndị a na-emebeghị, na ihe ndekọ nke ndị na-emepụta ụlọ.
Market ngwa ngwa
Ogologo ngwa ahia, ma ọ bụ ọnụahịa na ahịa nke enweghị nlezianya nke nkwụnye ego na ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, marakwa ọnọdụ mgbe ahịa ego na-enwe nnukwu mgbanwe dị iche iche, tinyere nke dị oké ọnụ ahịa. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọnụ ọgụgụ, ma ọ bụ ahịa, nwere ike ọ gaghị adị ngwa ngwa nye ndị ahịa ruo mgbe ahịa dị n'usoro na-ebido.
Ọnụ ego Fed
Ọ bụ ọnụmago ego nke ụlọ ọrụ na-edebe ego na-ewepụta ego e nwere na Federal Reserve na nhazi ụlọ ọrụ ọzọ n'abali. A na-eji ya emezi iwu ego ma na-emetụta mgbanwe na ego nke na-eweta mgbanwe n'ọkwá ọrụ na akụnụba United States.
Ụgwọ ego nkịtị nke ụlọ akụ na-achịkwa nke Ụlọ Nche Federal Reserve ha.
Nke a bụ mkpesa maka United States Federal Reserve Bank.
Kọmitii Open Market Committee
A makwaara dịka FOMC. Nke a bụ ahụ mmadụ nke na-ekpebi usoro ego nke a ga-eme na United States. FOMC bu ihe kpatara ya maka ikpo ego ego nke Federal na onu ogugu ego. Ọnụ ọgụgụ abụọ ahụ na-enwe mmetụta n'ịchịkwa ọkwa nke ụba ego na ọkwa nke akụ na ụba na United States.
Ụlọ nke Federal Reserve System, nke onye isi ala United States họpụtara maka okwu 14 afọ, otu n'ime ụlọ ọrụ ahụ ka a họpụtara maka afọ anọ dị ka onyeisi oche.
Isi ụlọ akụ na United States, nke gụnyere 12 Federal Reserve Banks, na-achịkwa nchịkwa 12 n'okpuru nchịkwa kpọmkwem nke Board Reserve Reserve. Ndị na-eri nri ahụ dị mkpa maka ụlọ akụ ndị Comptroller nke Currency na-akwụ ụgwọ na nhọrọ maka ụlọ akụ na-achịkwa obodo.
Ọ bụ okwu a na-eji nyocha nyocha nke na-ezo aka na nkwado na nguzogide iguzozi mgbazi nwere ike ịda tupu ịlaghachi na ntụziaka nke isi ego.
Jupụta, ma ọ bụ jupụta
Nke a bụ ihe a na-akwụ ụgwọ maka / na akaụntụ onye ahịa site na onye ahịa. Ozugbo ejuputara, enweghi ike ihichapu iwu, megharia, ma obu gbaghara ya.
Ọ bụ ọnụahịa nke iwu nke onye ahịa iji gaa ogologo ma ọ bụ mkpirikpi ka e gburu.
Okwu siri ike
A kọwapụtara ya dịka ọnụahịa ọnụahịa, nyere ya nzaghachi maka arịrịọ maka ọnụego siri ike, nke na-eme ka ọnụọgụ maọbụ jụọ ego ọnụego ahụ. Ọ bụ ọnụahịa nke nchịkọta edemede dị njikere ịrụ ọrụ, maka nkwụsịtụ ntụpọ.
Iji ụtụ isi na / ma ọ bụ ihe mkpali dịka ngwá ọrụ, iji mejuputa iwu ego.
Ndị a bụ ụbọchị kalenda kwa ọnwa dị ka ebe ahụ. E nwere ihe abụọ. Maka nkọwa zuru ezu kọwapụtara ozi gbasara oge bara uru.
Ọnụ ọnụ Exchange
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọchịchị na-akwụ. Ọ bụ ego ọnụego nke a setịpụrụ megide ego ọzọ ma ọ bụ ego.
A kọwapụtara ya dị ka usoro iji chọpụta ọnụego site na ịmepụta ọnụego nke na-eme ka ndị na-ere ahịa zụọ ndị na-ere ahịa. Usoro a na-eme otu ugboro, ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị na oge akọwapụtara. Ụfọdụ ego na-eji, karịsịa maka ịhazi ọnụ ọgụgụ ndị nlegharị anya.
E guzobere protocol Exchange Information (FIX) na 1992 ma ọ bụ ọkọlọtọ mgbasaozi maka ọrụ maka mgbanwe nke ozi metụtara azụmahịa na ahịa.
Achọpụtara dị ka ọnụego mgbanwe ma ọ bụrụ na ọnụahịa ego nke ndị ahịa na-ere na mbubata na ngwa dịka ego ndị ọzọ. Ụgwọ ego nke ndị ọrụ ego na-eme ka ego na-agba ọsọ. Mgbe ụdị ọrụ ahụ na-emekarị, a na-amara na a na-ese n'elu mmiri dị ka ihe ruru unyi.
Kọmitii Open Market Committee, bụ kọmitii n'ime Ụlọ Nche Federal Reserve nke gụnyere ndị òtù 12 bụ ndị na-edozi iwu nke ego. Nkwupụta ndị ahụ na-agwa ndị mmadụ banyere mkpebi ndị a na-eme na ọnụego mmasị.
Okwu ahụ bụ "mgbanwe mba ọzọ" na-ezo aka na ahia mgbanwe n'ahịa ndị ọzọ, ọ dịghị otu, nke a na-ejikọta ọnụ, nke a kwadoro ma ghọta maka mgbanwe trading. Okwu ahụ pụkwara ịpụta na ahia ego na mgbanwe dịka IMM na Chicago Mercantile Exchange.
Ntughari Mgbasa Ozi
Ahịa nke na-agụnye ịzụta oge na ịzụta ego abụọ na ụbọchị kpọmkwem na ọnụego kwetara na oge ngwụcha nke nkwekọrịta ahụ, nke a makwaara dịka 'mkpụmkpụ ụkwụ', n'otu ụbọchị n'ọdịnihu na ọnụego kwetara na oge nkwekọrịta - 'ogologo ụkwụ'.
"Forex" bụ aha dị mkpirikpi a nabatara maka mgbanwe mba ọzọ ma na-ezokarị aka na ahia mgbanwe n'ahịa ndị ọzọ.
Azụ ahia nke ndị ahịa ahịa na-agba mbọ iji mee ihe dị iche iche na ọnụahịa ego abụọ. Ọ na-eji uru nke mgbasa ozi dị iche iche nke onye na-ere ahia nyere maka otu ụzọ. Usoro a gụnyere imeghachi ngwa ngwa ohere.
Oge ahịa ahịa Forex
Debere dịka awa ole ndị ahịa na-aga ahịa nwere ike ịzụta, ree, gbanwee ma kwupụta ego. Ebe ahia ihu ahia na-emeghe 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị ise n'izu. Ahịa ego na-ejikọta: ụlọ akụ, ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ akụ etiti, ụlọ ọrụ nchịkwa ego, oke ego, ndị na-ere ahịa na ndị na-etinye ego. Ego ahia ego nke mba enweghi nkwekorita nke etiti, o gunyere netiti mgbasa ozi nke ndi ahia na ndi ahia. Azụmahịa azụmaahịa Forex dabeere na mgbe ahia na-emeghe na mba ọ bụla na-emetụta. Mgbe ahịa ndị ahịa na-agabiga; Asia, European na USA, ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ahia na-eme.
Ihe Echere Iche Iche
Nke a na-ezo aka na njirimara nke ndị na-egosi, ndị ahịa na-ejikarị eme ihe iji kọwaa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na mmetụta nke ahịa nwere ike ịgbanwe site na bullish iji na-akwado ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-eji ya iji chọpụta nkwado na nkwụsi ike. A na-atụle isi ihe dị mkpa dị ka nkezi nke: elu, dị ala na nso (HLC), site na nnọkọ ahịa ụbọchị gara aga.
Ịgba Ụdị Mgbasa Ozi Forex
Na-agbasa ịkụ nzọ dịka nkwụnye ego maka ọnụọgụ ego nke ego abụọ, ọnụahịa na ịrịọ ego.
Na-agbasa ịkụ nzọ aka inye ego gbasaa ịkụ nzọ ọnụ abụọ ọnụahịa, na bidoro na ịrịọ price - mgbasa. Ndị ahịa na-ere ma ọ bụrụ na ọnụahịa nke ụzọ ego ahụ ga-adị ala karịa ego bidoro, ma ọ bụ karịa karịa ịrịọ ego.
Usoro nhazi software nke Kọmputa na-adabere na akara ịzụ ahịa azụmaahịa, nke na-enyere aka ikpebi ma ị ga-abanye ahia maka otu ụzọ ego n'otu oge ọ bụla. Ngwaọrụ Forex, maka ndị ahịa azụmaahịa kpọmkwem, na-enyekarị aka n'iwepụ ihe omume uche nke azụmaahịa.
A ga-akọwa nke a dị ka ịzụ ahịa nke dabeere na nyocha iji chọpụta ma ịzụta, ma ọ bụ ịzụta otu ụzọ ego n'otu oge, na-adaberekarị na setịpụrụ ihe ngosi sitere na ngwá ọrụ nchịkọta ihe nyocha, ma ọ bụ akụkọ ihe omimi na data. A na-ejikwa usoro ọrụ ntanetị azụ ahịa azụmaahịa na-azụpụta ma ọ bụ na-ere mkpebi, nke akụkọ ihe mere eme na-eduga n'ahịa ahịa.
Mgbe ụfọdụ a na-eji ya dị ka nkọwa ọzọ maka 'azụmahịa na-aga n'ihu' ma ọ bụ 'ọdịnihu'. Karịsịa maka ndokwa na otu mmetụta ahụ dị ka ihe na-aga n'ihu n'etiti ụlọ akụ na onye ahịa.
Gaa n'ihu ọnụ
A na-ekwu ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu maka isi ihe dị n'ihu, na-anọchite anya ọdịiche dị n'etiti ntụgharị na ọnụ ọgụgụ. Iji nweta ọnụego ọnụego, ma ọ bụ megide ọnụego mgbanwe ọnụego, isi ihe na-aga n'ihu ka a ga-agbakwụnye, ma ọ bụ wepụ ya na ọnụego mgbanwe. Mkpebi ịmepụta ma ọ bụ gbakwunye ihe dị iche iche kpebiri site na ọdịiche dị n'etiti ọnụego ego maka ego abụọ ahụ metụtara azụmahịa. A na-akwụ ụgwọ ego isi ego na ọnụego kachasị elu karịa ego ego a na-agbaso na ahịa ahịa. A na-ewepụta isi ihe dị n'ihu site na ọnụego ntụpọ. Ụgwọ ego ọnụ ala nke ụtụ na-adịchaghị mkpa, a na-agbakwunye isi ihe na-atụ n'ihu ọnụego, iji nweta ọnụego ọnụ.
Ndị a bụ nnukwu akụ na ụba akụ na ụba na mpaghara ma ọ bụ mba, nke a nabatara dị ka ntọala maka ọnụ ahịa nke ego, ndị a ga-agụnye ihe ndị dị ka: mmụba, mmụba, nkwụsị ahịa, njedebe gọọmenti, na ọnụego mmasị. Ihe ndị a nwere mmetụta na ọnụ ọgụgụ buru ibu karịa mmadụ ole na ole họrọ ndị mmadụ n'otu n'otu.
Otu usoro eji eji ego tụnyere ego kachasị mkpa na-egosi na ihe gbasara akụ na ụba, atụmatụ gọọmenti, na ihe ọ bụla nwere mmetụta na mba ego ahụ.
Nke a bụ ihe omuma maka mgbanwe mba ọzọ, nke a na-ejikarị eme ihe n'oge a.
FXCC bụ mba ụwa nke a na-enye ikike ma na-achịkwa n'ọtụtụ dị iche iche, gụnyere nke abụọ: FX Central Clearing Ltd na Central Clearing Ltd.
FXCC na-enye usoro nhazi usoro nhazi nke ngosi, nke bu oyiri ihe zuru oke nke ikpo ahia FXCC maka ezigbo ahia. Nlepụta ahịa ngosi nke ngosi na-enye ohere ka ndị ahịa FXCC mara ọrụ arụmọrụ zuru ezu na njirimara, na-enweghị nsogbu ọ bụla n'isi obodo site na ịmekọrịta ahịa. Ikpo okwu anaghị agụnye ememe ma ọ bụ nkwekọrịta, ya mere, uru ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọghọm site na iji ikpo okwu bụ mebere. O doro anya na ebumnuche ngosi naanị.
FXCC Risk ngosi Document
Ihe ngosi FXCC nwere ike igosi ihe ize ndụ ndị metụtara mgbe ị na-eme ihe na CFDs na inyere onye ahịa aka na ịme mkpebi ego na ihe ndabere.
A kọwapụtara dịka mba asaa ahụ na-emepe emepe: USA, Germany, Japan, France, UK, Canada na Ịtali.
Nke a bụ G7 gbakwunyere: Belgium, Netherlands na Sweden, otu jikọrọ ya na mkparịta ụka IMF. Mgbe ụfọdụ, Switzerland na - etinye aka na ya.
Obere maka Great Britain Pound.
Debere dị ka ihe ịzụta ụzọ ego. Ọmụmaatụ; ọ bụrụ na onye ahịa zụtara EUR / USD, ha 'ga - aga' Euro.
Nke a bụ ihe na-ere otu ụzọ ego. Ọmụmaatụ; ma ọ bụrụ na onye ahịa erere USD / USD, ha ga - 'eme mkpụmkpụ' Euro.
A kọwara nke a dịka usoro ego ego, nke ọchịchị na ma ọ bụ ụlọ akụ etiti, na-edozi ego ha nke a ga-agbanwe kpamkpam n'ime ọlaedo n'ihi ihe ndị bụ isi. O nwere ikike ego na-abụghị ego, ya mere a na-atụ anya na ọ ga-ejigide njedebe kachasị mkpa. Ọ na-ezokwa aka na usoro ịsọ mpi na-asọ asọ, nke ọlaedo, ma ọ bụ ihe nkwụnye ego maka ọlaedo, na-eme dị ka ụzọ isi gbanwee mgbanwe.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na a kwadoro ya (iwu GTC)
Otu iwu ịzụta ma ọ bụ ree na ọnụahịa siri ike nke na-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike ruo mgbe a ga-egbu ya ma ọ bụ ka onye ahịa ahụ kwụsịrị.
Ọ bụ okwu ejiri jargon nke na-anọchi anya akwụkwọ dollar US.
Debere dịka ọnụahịa zuru oke nke ngwongwo na ọrụ niile e mepụtara na mba dị icheiche oge.
Nnukwu Ngwaahịa Mba (GNP)
Ọ bụ ọnụ ọgụgụ akụ na ụba dị ka GDP tinyere ego a na-enweta site na mmepụta, ego, ma ọ bụ ego ọ bụla e nwetara na mba ọzọ.
Hụ: Ọ dị mma ka a kwụsịrị.
Ihe oriọna nke a na-eji akụkụ ahụ dịka nke nwere ogologo oge na-ekwu okwu na ala.
A na-akọwa akụkụ ahụ dịka ọnụ ọgụgụ dum nke ọnụahịa ọnụahịa, na-ekpochapụ mkpụrụedemede. Na ahia ahia ahia, aka ahụ na-ezo aka na nke ọnụahịa ahụ e hotara nke gosipụtara na ego ọnụahịa ma nye ego maka ego ahụ. Ọmụmaatụ; ọ bụrụ na ụdị ego USD / USD nwere 1.0737 ma rịọ maka 1.0740, njikwa ahụ bụ 1.07; ọnụego nha nhata ma ọnụahịa ahụ na ịrịọ ego. A na-ekwukarị na ọ bụ "nnukwu ọnụ ọgụgụ" a na-ejikarị aka dịka ahịrịokwu iji kọwaa ọkwa dị elu, dịka ọmụmaatụ, DJIA na-abịaru 20,000 nso.
A na-amarakwa ego ego siri ike dịka ego siri ike ma ọ bụ ụdị ego dị oke ọnụ ahịa n'ịzụ ahịa n'ụwa. A na-ekwupụta ego n'ụzọ zuru ụwa ọnụ dị ka ụdị ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ. Ego siri ike n'ozuzu ha na-ejide onwe ha n'oge obere oge, ha dịkwa nnọọ mmiri mmiri na ahịa ahịa. A na - emepụta ego siri ike site na mba ndị nwere nnukwu akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike.
Mmetụta nke ụlọ akụ etiti mgbe ọ na-ezube iwelie ọnụ ọgụgụ mmasị, nke nwere ike ịlaghachi na ntipụta na ego ahụ.
Isi na Kwesịrị
Ihe eji ede ihe na nyocha nyocha nke na-atụ aro ngbanwe nke omume, dịka ọmụmaatụ, site na bullish ka mmeghachi omume na-agbagwoju anya.
Ọ na-agụnye ijide ọnọdụ dị ogologo ma dị mkpirikpi nke otu akụ na-akpata.
Ogologo ahia ugbua (HFT)
Nke a bụ ụdị ahia nke algorithmic na nnukwu oge nke iwu, arụ ọrụ ọsọ ọsọ.
Elu / Ala
Ọnụahịa kachasị elu ma ọ bụ ego ahịa kachasị dị ala maka ngwá ọrụ dị egwu maka ụbọchị ahịa taa.
Nke a bụ okwu eji kọwaa ihe onye na-ere nke otu ụzọ ego, mgbe ọ na-ere n'ahịa ahịa.
Nke a bụ ụda ego maka Hong Kong dollar (HKD), ego nke Hong Kong. A na-ewu ya nke 100 cents, na-anọchite anya akara $, ma ọ bụ HK $. Edere akwụkwọ atọ nke ndị China na-esite na ya nwere ikike inye Hong Kong dollar, n'okpuru iwu gọọmenti Hong Kong. HK $ na-agafe site na ngwongwo mgbanwe ego nke gọọmenti US na-edebe.
N'ihe gbasara ahia ego, a kọwapụtara ya dịka onye zụtara ụzọ ego.
Nkọwapụta akụ na ụba na-eme njem ahịa nke metụtara ụlọ, nke kachasị na USA na UK, dabere na data ụlọ obibi ebipụtara.
Nke a bụ ọnụ ọgụgụ nke ụlọ obibi ndị ọhụrụ (ụlọ ndị nwe ụlọ) nke bidoro n'oge ọ bụla etinyere, nke a na-ekwukarị kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ.
Ejiri Ichimoku mee tupu Agha Ụwa nke Abụọ, dị ka ihe atụ usoro ahịa ahịa ego, ihe na-emekarị na-egosi na ị ghọtara isi ihe dị iche iche nke akụkọ ihe mere eme na ihe dị iche iche n'oge. Ebumnuche nke njirimara bụ ịmepụta akara ngosi ahịa dịka nke ahụ site na mpega ọkpụkpụ, ma ọ bụ site na Nchikota MACD. A na-ebugharị ebe akara ederede Ichimoku na oge, na-enye nkwado zuru oke na ebe ndị na-eguzogide, nke a nwere ike belata ihe ize ndụ nke mmeghe ụgha.
Ego ego ego International kwadoro na 1946 iji nye obere ego mgbazinye ego zuru ụwa ọnụ.
Ọ bụ ọnụego nke sitere na ọdịiche dị n'etiti ọnụ ọgụgụ ntụpọ na ọnụego n'ọdịnihu na azụmahịa.
Ọnụ ego na-enweghị atụ
Akwụnye ego nke na-adabere na iwu mgbanwe mba ọzọ ma ọ bụ ihe mgbochi nkịtị agaghị enwe ike gbanwere ego ọzọ. Enwere ike ịkwụ ụgwọ ego na ahia, n'ihi oke elu, ma ọ bụ site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ntughari uzo bu mgbe USD bu ego isi nke uzo ma obughi onu ego. Ebe ọ bụ na USD bụ ego kachasị elu na ahịa ahịa nke mba ọzọ, a na-ejikarị ya dị ka ego isi ego na ego ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ yen jenị ma ọ bụ dollar Canada ji dịka ego ịkwụ ụgwọ.
Ndepụta Ọrụ Ụlọ Ọrụ (IPI)
Ihe ngosi akụ na ụba nke na-arụ ọrụ ahịa. Ọ bụ Federal Reserve Board nke USA na-ebipụta ya kwa ọnwa ma na-atụle mmepụta mmepụta nke ntinye, ịmepụta, na ihe ndị dị mkpa.
Edebere dị ka ịrị elu ahịa nke ngwaahịa ndị na-ere ahịa, nke metụtara kpọmkwem Mbelata ikike ike ịzụta.
Ntọala Mkpa mbụ
A kọwapụtara nke a dị ka ọkara kachasị mkpa dị mkpa, iji mepee oghere ọhụụ ọhụrụ, ebe ebuteala mbụ ga-abụ ihe na-erughị ma ọ bụ hà nhata. A ga-egosipụta ọkwa nke mbido mbụ dịka pasent (dịka ọmụmaatụ, 1% nke ọnụahịa US dollar), ma ọ bụ enwere ike gbakọọ ya site na ngụkọta leverage.
A na-akọwa ahịa ahịa interbank dị ka onye na-ere ahịa ahịa nke ndị na-ere ahịa, na ahịa FX ha ga-eme ka ndị na-ere ahịa na mgbanwe nke mba ọzọ.
Ọnụ ọnụ Interbank
Ọnụ ego mgbanwe ndị ọzọ na-agbaso n'etiti ụlọ akụ ụwa.
Nke a bụ ụlọ ọrụ brokerage nke na-arụ ọrụ n'ahịa ahịa (ma ọ bụ OTC), na-arụ ọrụ dị ka ndị ọkọnọ n'etiti ndị isi na-ere ahịa na ndị ahịa ahịa. Ọmụmaatụ; ndị òtù London Stock Exchange, bụ ndị na-enye ohere ka ha na ndị ahịa na-ere ahịa, ma megidere ọha mmadụ.
Ọnụ ego a kwadoro iji ego mee. A na-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị na-amasị mmasị ọnụego nke Fed.
Mmasị ọnụahịa Mmasị
Dika ihe si na nke a puta, onodu ogugu uzo di iche iche na ihe di iche n'agbata onodu ozo na onodu ogugu di n'etiti obodo abuo ha nhata. Ụdị ọnụahịa ọmụrụndụ na-ejikọta: ọnụego mmasị, ọnụego mgbanwe ntụpọ na ọnụego mgbanwe mgbanwe.
Ọ bụ ọrụ site na etiti nke na-emetụta uru nke ego ya, site na ire ma ọ bụ ịzụta ego ala ọzọ iji gbanwere maka ụlọ nke aka ha, dị ka ịnwa ịmetụta ọnụego mgbanwe.
Ọnọdụ na-adịghị mma
Dezie dịka ọkwa nke onye ahịa nke FXCC na-agba n'ime ụbọchị ahụ. N'ikpeazụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị nso.
E zoro aka dị ka mmadụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu nke na-ewebata ndị ahịa na FXCC, mgbe mgbe maka nkwụghachi ụgwọ maka nkwụnye ụgwọ maka azụmahịa. A na-egbochi ndị na-adọta ndị mmadụ ịnakwere ego ndị ejiri ego nweta n'aka ndị ahịa ha.
A kọwapụtara ya dị ka otu azụmahịa nke otu ego nke na-azụkọ ego na-enwe mmekọrịta dịka ibe ha, ebe ego ha na-ejikọta aka na ụtụ ego ọzọ iji nye ego na mbute ọnọdụ na ahịa ahịa. Isi ụlọ ọrụ etiti ndị na-ekere òkè na nkwekọrịta a na-ejigide ụgbọ mmiri site na ịzụrụ na ire ego nke onye nke ọ bụla.
Nke a bụ mkpesa ego maka Japanese yen (JPY), ego maka Japan. Yen gụnyere 100 sen, ma ọ bụ 1000 gaa. Yen na-anọchi anya ya (dị ka ihe nnọchianya) site na isi obodo Y, nke nwere ọnụọgụ abụọ dị n'etiti.
Edebere dị ka ego eji eme ihe dịka akwụkwọ na azụmahịa mba na mgbe ị na-etinye ọnụego mgbanwe. Banyere etiti Central na-edebe ego ego dị iche iche na-edebe ego ma hụ dollar US dịka ụtụ isi ego kachasị mkpa n'ụwa.
E hiwere Keltner Channel na 1960 site n'aka Chester W. Keltner ma gosipụta ya n'akwụkwọ ya bụ "Olee otú esi mee ego na ngwaahịa". Keltner Channels na-emepụta usoro atọ, nke nwere: nke dị mfe na-agagharị agafe, ya na mkpịsị elu na nke obere nke a kpara n'elu ma n'okpuru nke a na-agagharị. Ogologo nke agbụ ahụ (ịmepụta ọwa), dabere na onye ọrụ mere ka a gbanwee ihe a na-etinye na Nkezi Ezi Gburugburu. A na-agbakwunyere nsonaazụ a ma wepụ ya site na ntinye ala ọ bụla na-agafe.
Slang maka dollar New Zealand.
Mara Onye Ahịa gị, nke a bụ usoro nhazi nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ ụgha dịka FXCC ga-eso.
Ndị na-eduzi ma na-eme ihe ngosi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ (ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile) kọntaktị ụkọ, ha anaghị eduga; ha anaghị enye ihe àmà na, dịka ọmụmaatụ, otu ụzọ ego ga-akpa àgwà n'ụzọ ụfọdụ. Ụfọdụ nyocha dị mkpa nwere ike iduga, nyere na ọ nwere ike ịbụ ihe ngosi na-egosi ihe omume. Nnyocha nke ndị ahịa na-azụta àgwà n'ọdịnihu nwere ike igosi ahụike nke ụlọ ahịa mkpọsa. Nnyocha nke ụlọ na-ewu ụlọ nwere ike inye ihe akaebe nke ndị òtù ha iji wubekwu ụlọ. Nyocha nke CBOT na-egosi na ndị ahịa na-agba mbọ ka ha zụrụ ma zụọ ngwá ọrụ ego ụfọdụ.
Na-ere ego a kwukwara, nke a makwaara dị ka iburu ọnụahịa nke ọnụego ahụ.
Uru nke ego mba ndị ọzọ, nke iwu kwadoro dịka usoro ịkwụ ụgwọ. A na-ele ego ego anya dị ka onye nwere ikike n'ụgwọ n'ọtụtụ mba, a na-ejikwa ya ịkwụ ụgwọ ihe nzuzo ma ọ bụ nke ọha, yana ịkwado ụgwọ ego. A ga-akwụ ụgwọ onye ji ụgwọ iji kwenye ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ. Ọ bụ òtù mba ahụ nyere ikike, dị ka Treasury US na United States na Bank of England na UK.
Nke a bụ njikwa nke nnukwu ọkwa dị elu, site na iji ntakịrị ego isi.
Obu ibu ibu oru iji weputa ego n'emere gi na ndi ozo.
Echetara ọnụ ụlọ akụ London.
Enwere ike iji usoro a na-agbanye iji tinye ahia iji banye n'ahịa n'oge ọnụahịa akọwapụtara. Ozugbo ahịa ahịa rutere ọnụahịa mbụ, iwu ahụ nwere ike ịbịaru (usoro iwu na-adịghị ekwe nkwa na a ga-egbu iwu ahụ) na ọnụahịa a kapịrị ọnụ kwuru. O nwere ike ime, n'ihi ụda ahịa na ahịa na ahịa ahụ ruru ọnụahịa ego ma na-alaghachi azụ site na ọnụahịa ego, na obere ọnụahịa gbanwere. Mgbe ahụ, iwu nwere ike ghara ịmegharị ma ọ ga-anọgide na-arụ ọrụ ruo oge a ga-egbu ya ma ọ bụ ruo mgbe onye ahịa ahụ kwadoro iwu ahụ n'onwe ya.
Nke a bụ ụgwọ onye ahịa ahụ na-akọwapụta mgbe ị na-etinye usoro iwu.
Ejiri eserese dị mfe na-ejikọ ọnụahịa otu maka oge ahọpụtara.
Nke a bụ ọnọdụ dị n'ahịa ebe a na-erepụta ego zuru ezu, iji zụta ngwa ngwa, ma ọ bụ na-ere ngwá n'ozuzu (ma ọ bụ nso) ọnụahịa ndị a kwụrụ.
Dọpụtara dịka azụmahịa nke na-emebi, ma ọ bụ mechie ọnọdụ a kwụburu.
Ozugbo akaụntụ onye ahịa ahụ enweghị ego zuru ezu iji jide ọnọdụ ndị a na-emeghe, mmiri ga-eme na dabere na ọkwa ndekọ dị iche iche nke ga-eme ka mmiri mepee oghere na ọnụahịa kacha mma n'oge a nyere. Onye ahịa nwere ike igbochi ịnwụ mmiri nke akaụntụ ha na ọnọdụ ha site na ịdebe akụkụ ọzọ n'ime akaụntụ ahụ, ma ọ bụ site na imechi oghere (s).
Nke a bụ okwu eji kọwaa oke olu dị ịzụta, ma ọ bụ na-ere na oge na oge.
Site na nchịkọta ogbako nke ọdọ mmiri London (Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, Barclays Capital, Societe Generale na HSBC), a na-akwụ ụgwọ maka ọ bụla nke ọla dị oké ọnụ ahịa, dịka ọlaọcha, ọlaọcha, platinum na palladium kwa ụbọchị Ntọala na 10: 30 (London am fix) na 15: 00 GMT (London nkwụsị nyocha). A na-ewere ọnụahịa London fix fix a ga-edozi ozugbo ogbako oku na-akwụsị.
Mgbe onye ahịa meghere ọnọdụ ọhụrụ nke ịzụ otu ụzọ ego, a na-ewere ya na ọ gara 'ogologo'.
Onye na-ere ahịa na ụgha maka ego abụọ USD / CAD.
Achọpụtara dị ka unit nke na-eji atụle uru nke azụmahịa. A na-akpọ ọnụahịa site na ọnụ ọgụgụ nke nza ndị a gbanyere ahia, kama iji ọnụ ahịa ego ha. Ọ bụ ụtụ ahịa azụmaahịa nke na-ezo aka na usoro 100,000.
MACD, Ntọala Ntigharị na Ngbanwe
Ọ bụ ihe na-egosi njikọ n'etiti ọnụọgụ abụọ na-agagharị agagharị na otu ha si emekọrịta mgbe ọnụahịa gbanwere. Ọ bụ ihe na-emekarị mgbe ị na-agbaso mgbaaka.
Nke a bụ ala kachasị dị mkpa, nke onye ahịa ga-enwe na FXCC, iji meeghe, ma ọ bụ kwado ọkwá.
Di na nwunye abụọ na-ezo aka na ego abụọ a na-erekarị na ahịa mbụ, dị ka EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF. Ugboro abụọ ego a na-ebu ụzọ na-achụpụ ahịa ahịa ụwa, ọnụọgụ abụọ USD / CAD na AUD / USD nwekwara ike ịsị na ọ bụ majors, ọ bụ ezie na a na - akpọkarị ụzọ abụọ a dị ka "ụzọ abụọ bara uru".
Ọ bụ ngụkọta mmepụta nke ụlọ ọrụ n'ichepụta ọrụ nke Industrial Production.
Ọ bụ okwu eji eme mgbe onye na-azụ ego ga-akwụ ụgwọ ahịa ego na akaụntụ ndị ahịa ahụ n'ụzọ yiri nke ahụ iji nweta onye ndụmọdụ na-emefu ego, ka ị nwee ike ijikwa akaụntụ ego maka, dịka ọmụmaatụ, equities.
A na - akpọ oku mbido mgbe ọkwa ndị ahịa na - adaba na 100% dịka nke FXCC setịpụrụ. Onye ahịa nwere nhọrọ iji gbakwunye ego iji mezuo iwu ndị dị na ya ma zere Kwụsị ma ọ bụ nwee ike mechie azụmahịa ndị kacha nta.
A na-akọwa nke a dị ka ọnụahịa zuru oke nke ndị ahịa na-agbagha megide oghere ndị ghere oghe.
Uzo na uzo uzo di na ya. Ya bụ, ala ahụ dị elu, nke dị elu karịa
Achọrọ iji nọgide na-enwe ọnọdụ mepere emepe nakwa na ntụgharị ihu. E gosipụtara mgbakọ na mwepụ; oke = oghere oghere / kachasị ọnụọgụ leverage ruru. Ọmụmaatụ; ọnọdụ USD / CHF 100,000 USD n'ogo kachasị elu nke 100: 1, ga-achọ ka e kwere nkwa iji aka ya kwekọrọ na 100,000 / 100 ma ọ bụ $ 1,000. Iji gbakọọ ọnụ ọgụgụ maka ọnụọgụ ego, ebe USD abụghị ntọala (mbụ) (eg EUR / USD, GBP / USD) na crosses (EUR / JPY, GBP / JPY), na ego mbụ a gbanwere n'ime USD, site n'iji nkezi ọnụego mgbanwe (s). Ihe atụ; ọ bụrụ na onye ahịa zụtara 1 otutu nke EUR / USD, mgbe ọnụahịa bụ 1.0600. Ya mere, 100,000 EUR yiri 100,600 USD. $ 100,600 / 100 leverage ratio = $ 1,006.00
A na-eji okwu a maka oge kpọmkwem nke ụbọchị mgbe ahịa ahụ mechiri, nke bụ 5 PM EST na Fraịdee maka ụta ndị ahịa.
Ọdị ahịa ahịa
Ọ na-egosi iwu ịzụta / ere ahịa na ahịa maka ngwá ọrụ.
A na-eji usoro ụlọ ọrụ STP na ECN eme ihe, nke a bụ usoro mmegbu mgbe a naghị ekwe nkwa ịzụta ego a na-ahụ na ihuenyo nke ọnụahịa ahụ, mana ejiri n'aka na ọ ga-akwụ ụgwọ ahịa ahụ. Enweghị ihe ọ bụla e dere na ụdị mbibi a.
A kọwara onye na-ere ahịa dịka onye, ​​ma ọ bụ kwenyero ikike ịmepụta na ịnọgide na-ere ahịa na ngwá ọrụ.
A na-ewere usoro ahịa dị ka iwu ịzụta, ma ọ bụ ire otu ụzọ ego ahọpụtara, na ahịa ahịa ugbu a. A na-egbu iwu ahịa na ọnụahịa egosipụtara na mgbe onye ọrụ jiri bọtịnụ 'BUY / SELL' pịa.
Ọ bụ mkpụrụ ego ego abụọ a na - akwụ ugbu a nke a ga - eji gbanwere ego maka onye ọzọ na oge.
Ọ na-ezo aka n'ihe ize ndụ nwere ike ibilite site na ndị ahịa, dịka ọmụmaatụ, ọkọnọ na ọchịchọ, nke a na-eme ka uru nke ulo oru mpi na-agbanwe.
Nke a bụ okwu eji eme ihe atụ nke mmekọrịta nke nha nha nha anya zuru oke, na oke nha anya.
Debere dị ka ụbọchị maka nhazi maka azụmahịa nke a kpebiri tupu oge abanye na nkwekọrịta ahụ.
Izu ahia ego ahia kachasị mma
E gosipụtara Leverage dịka nkwekọrịta, dị njikere ịmepe ọhụụ ọhụrụ. Ọ na-enye ndị ahịa aka ịbanye n'ahịa ahụ karịa ahịa karịa ego mbụ ha ga-enye ha. Ọmụmaatụ; usoro nyocha nke 100: 1 na-enye onye ahịa ikike ịchịkwa ọnọdụ nchịkọta $ 100,000, yana $ 1,000 nke oke ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Ọ bụ obere ụlọ ọrụ nkwekọrịta dị na trading Forex nke nhata nke 1,000 nke ego ego.
Nnukwu igwe na-eme ka ndị ahịa novice na-azụ ahịa dị ntakịrị ma jiri belata ihe ize ndụ ha.
Na akaụntụ micro, ndị ahịa na-enwe ike ịzụta ọnụọgụ nza, ya mere ụdị akaụntụ a na-ewu ewu karịsịa n'etiti ndị ahịa ahịa na-enweghị ike ịzụ ahịa obere ego.
Obere akaụntụ Forex
Ụdị akaụntụ a na-enyere ndị ahịa aka ịbanye n'ahịa na ọnọdụ nke 1 / 10 nha nke ọkwa nha.
Obere nza nwere ụdị ọnụọgụ ego nke 0.10, ebe ọnụ ahịa nke otu pip ma ọ bụrụ na ejiri USD tụnyere $ 1.
Nkwụnye ego nke obere ego
Ọnụ ego abụọ nke obere ego, ma ọ bụ "ụmụntakịrị" na-agụnye ọtụtụ ego abụọ na ego ego. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-atụle Euro megide paụndụ nke UK (EUR / GBP) dịka obere ego ego, n'agbanyeghị na a na-ere ahịa ya na mgbasa na-adị ala. A pụrụ ịkọwa dollar New Zealand na Dollar US (NZD / USD) dịka obere ego ego, n'agbanyeghị na a na-edekwa ya dị ka "ụzọ ahia".
Ọ bụ usoro ahia nke na-ekwe ka ndị na-etinye ego 'ahịa ahia' ndị ọzọ na-azụ ahịa na ndị na-achụ ego. Ha ga-eleda ahia nke ndị ọzọ na-etinye ego na ha ga-egosipụta na akaụntụ ha.
Kwa ọnwa. Ntughari eji eme ihe maka ichikota ngbanwe pasent na onu ogugu n'oge ugbua.
A na-eji okwu a eme ihe mgbe onye ahịa ahụ na-atụle nanị oge dị mkpirikpi nke usoro ego, ọ bụghị isi ihe. Usoro a na-adabere naanị na oge.
Ego ahia Ego
Ego ahia ahia bu uzo iji chebe megide oscillations ego ma nye ulo oru aka ibelata ego ego mgbe ha na ndi otu mba ozo no ahia. Tupu ị na-eduzi azụmahịa, a ga-ekpochi ego nke ego ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ, iji jide n'aka na ọnụahịa nke azụmahịa n'ọdịnihu ga-akwụ ụgwọ na ụlọ ụlọ ahụ nwere ụgwọ ọ ga-akwụ ma dị njikere ịkwụ ụgwọ.
Nhazi Nkezi (MA)
Edebere dị ka ụzọ isi kpochapụ otu setịpụ nke ọnụahịa / ọnụego data site na iji ọnụahịa nke ọnụ ọgụgụ data nke ụkpụrụ.
Nke a na-eme ma ọ bụrụ na mmiri dị ala n'ahịa kama ọ bụ nnukwu oscillations na ahịa na nnukwu mgbasa. N'okpuru dị warara ọ na-enwe ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị nke ịrịọ / rịọ rịọ.
Mgbanwe Na-adịghị mma
A kọwapụtara dịka ọchịchọ ọjọọ nke (SWAP) na-agbanye otu ọnọdụ n'abalị.
Na nhazi usoro ihe nhazi, isi nke Isi na ubu ma obu ndi ozo.
Ụdị Mmasị Dị Mmasị Dị Mmasị
Nke a bụ ọdịiche dị na ọnụma ọmụrụ ahịa si mba nke ego abụọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa dị ogologo na EUR / USD, ọ bụ ya nwe Euro ma na-agbaziri ego US. Ọ bụrụ na ọnụego ọzọ maka Euro bụ 3.25% na ntụpọ / ọnụọgụ ọzọ na US bụ 1.75%, mgbe ahụ mmasị dị iche bụ 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Debere dị ka usoro nhazi, nke bụ naanị ihe dị iche iche na ego ndị ahịa gbanwere na nso.
Ọnọdụ ntanye bụ ego zụtara ma ọ bụ ree nke enweghị ọkwa nke hà nhata.
A kọwapụtara ya dị ka akụ na-enweghị ụgwọ. A pụkwara ịkọwa ya dị ka akụ akụ.
Oge New York
Nhazi azụmahịa n'etiti 8: 00 AM bụ '5: 00 PM EST. (Oge New York).
Echere dị ka usoro data eji na nyiwe ahịa maka inye ndị ọrụ na ọdịnaya emelitere ugboro ugboro.
Enweghi ihe ndozi (NDD)
FXCC bụ "onye na-adịghị edozi desktọọpụ" onye ọkaibe. A kọwara NDD dị ka ohere a na-enweghị ike ịbanye n'ahịa ahịa interbank, ebe ego ndị mba ọzọ na-ere. Ndị na-ere ahịa Forex na-eji usoro ihe nlereanya a enye iwu site na ịzụ ahịa ndị na-enye mmiri, kama ịnagide otu onye na-enye ego. A na-enye ọtụtụ ndị na-enye ọrụ ego, iji nwee ike ịsọ asọmpi ma rịọ ego.
Ọ bụ okwu a na-eji kọwaa ụfọdụ mmeghari ego nke enweghị ike ịkọwa site na isi ihe ma ọ bụ nke ọrụ nhazi.
Ụgwọ ịkwụ ụgwọ na-abụghị nke Ugbo
Ihe ndekọ data ndekọ nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkọta nke United States, nke kwekọrọ na data ntinye ego maka ọtụtụ ndị United States. Ọ dịghị agụnye: ndị ọrụ ugbo, ndị ọrụ ezinikere onwe ha, ma ọ bụ ndị ọrụ na-enweghị nchịkwa. Ọ bụ ihe ngosipụta dị mkpa wepụtara kwa ọnwa.
Njirimara echiche na ngwa ego bụ uru nke ọnọdụ dị na dollar.
Ọ bụ mkpesa nke New Zealand Dollar na ụzọ dollar dollar. Ọ na-egosi ndị ahịa ọnụego dollar US maka otu dollar New Zealand. A na-akpọkarị ụdị ego ndị a na-akpọ NZD / USD dịka "ịzụ ahịa Kiwi".
OCO Order (One Cancel the Order Order)
Ụdị ụdị ebe ịkwụsị ma kwụsị iwu ka edobere n'otu oge ahụ ma ọ bụrụ na e mechara ahịa, a ga-ehichapụ onye nke ọzọ.
Nke a bụ ọnụ ahịa nke onye na-ere ahịa na-achọ ire ego. A na-akpọkwa onyinye ahụ ụgwọ ego ahụ.
Ọ bụ ọnọdụ nwere ike ime na ahịa mbụ, nke na-abụkarị nwa oge ma na-anọchite anya ihe omume ebe ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-ere ngwá ọrụ karịrị ọnụ ọgụgụ ndị ahịa dị njikere ịzụta.
Nke a bụ ahia nke na-ewepu, ma ọ bụ belata ụfọdụ, ma ọ bụ ihe ize ndụ ahịa ọ bụla n'èzí.
Nwanyị ochie nke Threadneedle Street, okwu maka ụlọ akụ etiti nke England.
Ọ bụ akaụntụ dị n'etiti brokers abụọ ebe a na-ejikọta akaụntụ onye ọ bụla na azụmahịa na akaụntụ akaụntụ ọ bụla, kama ịhọpụta ya iche. Onye ahịa ahia nke oge a ga-emeghe akaụntụ a na ụlọ ọrụ ọzọ, ebe a na-arụ ọrụ nhazi na arụmọrụ na aha onye na-edekọ akaụntụ.
Debere dịka usoro ntanetị nke na-enye ohere mgbanwe nke ego ndị mba ọzọ. A na-ekpochapụ ahịa ahịa Forex na ọ bụ netwọk nke kọmputa na-ejikọta ụlọ akụ, mgbasa ozi ego n'ịntanetị na ndị na-ere ahịa broktị na-enye ohere maka nnyefe nke ego ndị a gbanyere.
Na-anwa imebi ahịa, na ahịa ahịa ugbu a.
Nchịkọta nke nkwekọrịta na-enweghị mgbagwoju anya nke ndị ahịa na-etinye na njedebe nke ụbọchị ahia ọ bụla.
A kọwapụtara ya dịka iwu ka a ga-egbu ozugbo ahịa ahụ na-aga ma rute ọnụahịa ahụ.
Onodu ọ bụla nke onye na-azụ ahịa meghere nke na-emechighị otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nke otu nha.
Mepee windo oghere
FXCC windo nke gosiputara ọnọdụ nile nke ndị ahịa ugbu a bụ ndị na-emeghe.
A na-akọwa ikikere dị ka ntụziaka si n'aka onye ahịa ka ịzụta ma ọ bụ ree otu ego ego, site na ikpo okwu ahia FXCC. Enwere ike ịtọ ndọtị ka ọ bụrụ na ọ ga-abụrịrị, ozugbo ọnụahịa ahịa rute ego ahịa nke onye ahịa ahụ.
OTC na-eme ka mba ọzọ gbanwee
Na ngọngọ (mgbanwe) ahịa ahia nke mba ọzọ, nke ndị ahịa, dịka FXCC na onye ahịa, na-abanye na nkwekọrịta nkwekọrịta, ma ọ bụ azụmahịa ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'etiti onwe ha, maka oke ego a debere ma kwụọ ụgwọ megide ọnọdụ ndị dị oke.
Ihe mere mgbe mba nwere ezigbo akụ na ụba ruo oge dị ogologo, na-akpata nchịkọta nchịkọta na-eto eto nke na-enweghị ike ịkwado ya na ikike na-arụpụta nwere ike imeri onodu aku na uba, nke na-ebutekarị na mmụba nke mmasị na mmụba dị elu.
Ọnọdụ nke ehihie
Debere dị ka ihe si taa ruo ụbọchị azụmahịa ọzọ.
Enwee na-eme mgbe ọnụahịa nke ihe onwunwe jikọtara ọnụahịa nke ihe onwunwe ọzọ, dịka ọmụmaatụ; ma ọ bụrụ na euro dị ka dollar US. A na-ejikwa echiche "ọnụahịa" kwadoro maka nchebe na ihe onwunwe, ma ọ bụrụ na akụ abụọ nwere oke uru. Ndị na-azụ ahịa na ndị na-eme mgbanwe nwere ike iji echiche ọnụahịa nke ọnụahịa, iji chọpụta mgbe ọ bara uru iji tọghata njikota n'ime equities.
A na-akọwa pipụ dị ka obere ọnụahịa ego nke ọnụego mgbanwe nyere, dabere na mgbakọ ahịa. A na-akwụ ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ego abụọ na ọnụ ọgụgụ iri anọ, obere mgbanwe bụ nke njedebe ikpeazụ. Maka ọtụtụ ụzọ abụọ, nke a bụ 1 / 100 nke 1%, ma ọ bụ otu ebe.
Ọnụ ego nke ọ bụla n'ime ngwongwo a na-enye, nke a gbanwere n'ime ego ego nke onye ahịa.
Pip uru = (otu pip / ọnụego mgbanwe).
A na-ele nke a anya dị ka iwu ndị a na-atụgharịghị anya ka na-echere ma na-eche ka e gbuo ya, na ọnụahịa onye ahịa ahụ kpebiri.
Ọchịchị nke ọchịchị
Ngosipụta na mgbanwe na iwu gọọmentị nke nwere ike inwe nkwụsị na njedebe n'ọnọdụ onye ọrụ.
Oscillation kacha nta ma ọ bụ obere mmụba na ego ije.
Akpọrọ dị ka mkpokọta niile a na-etinye na ego a nyere. Ọnọdụ nwere ike ịbụ ma ọ bụ larịị, ma ọ bụ square (enweghị ikpughe), ogologo, (ego a zụrụ karịa ere), ma ọ bụ mkpụmkpụ (ego a na-ere karịa ịzụta).
Okporo ụzọ dị mma
Achọpụta ihe dị mma (SWAP) dị mma maka ịchọta ọnọdụ meghere n'abali.
Ihe ọzọ edere maka GBP / USD.
Ọnụahịa a na-ere ma ọ bụ zụta ego ma ọ bụ ego na-akpata.
A na-emepụta ahịa ahịa site na itinye ihe abụọ yiri ya na chaatị maka ngwá ọrụ ahụ achọrọ. Dabere na ma ọ bụ njem nke ahịa ahụ, ọwa ahụ nwere ike ịrị elu, na-arịda ma ọ bụ na-agbada. A na - ejikọsị oghere iji jikọta elu na eriri, ebe akara elu na - anọchi anya nkwụsi ike na akara ala na - anọchite anya ọkwa nkwado.
Nke a bụ mmụba nke data ahịa (ezigbo oge, ma ọ bụ egbu oge).
Kwesịrị ịkọ ahịa ahịa na onye ọbụla na onye ahịa ọ bụla nwere ohere nhata.
Gbasara ya dika ugwo nke uzo di na ndu.
Ọ bụ ọnụego eji gbakọọ ọnụego agbazinye ego site na ụlọ akụ dị na US.
Producer Price Index (mba)
PPI na-atụle mgbanwe ọnụahịa na ọkwa ọkwa nke nkwekọrịta nke isi obodo, ụgwọ ọrụ ọma nke ndị na-emepụta ihe, na-eme dị ka ihe ngosi nke ọnụahịa mkpọsa na-abịanụ.
Emechi ma ọ bụ ịghara ịchọta ọnọdụ iji ghọta uru.
Ịzụta Managers Index (PMI)
Ngosipụta akụ na ụba nke na-akwado ikike akụ na ụba nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Site n'inyocha nyocha kwa ọnwa nke ihe ruru. 300 ịzụta ọrụ, ọ na-enye ozi gbasara ọnọdụ azụmahịa ma na-eme ihe dịka ngwá ọrụ mkpebi maka ndị ọrụ.
Ọ bụ ihe na-egosi iji kọwaa njedebe nsị maka oghere dị mkpirikpi. SAR bụ usoro na-esote usoro.
Nkeji iri na ise. Ntughari eji eme ihe maka ichikota mgbanwe ngbanwe di iche iche di iche iche.
Ọnụ ọgụgụ dị mfe
Ọ bụ iwu ego nke Central Bank ji eme ihe iji belata ọnụma ọmụrụma ma mụbaa ego site na ịzụta ala n'aka ahịa. Usoro a choro ime ka ndi oru akuku ndi mmadu na-emefu uba na onodu aku na uba ma weghachite onu ogugu.
Na-agbaso ego ahụ na rịọ maka ụzọ ego.
Dịka trading Forex gụnyere ego abụọ, ọnụego ego na-anọchite anya ego nke abụọ n'ime ụzọ.
Ọmụmaatụ; na EUR / GBP, paịndụ UK bụ ego ọnụego na euro bụ ego isi. N'okwu ndị ziri ezi, ego ahụ e depụtara mgbe niile bụ ego ego mba ọzọ. N'okwu ndị ọzọ, ọnụego ọnụego bụ ego ego ụlọ.
Ọ bụ oge na-aga n'ihu na-abawanye na ọnụahịa nke ihe onwunwe.
Enwere ike ịkọwa mpaghara dịka ọdịiche dị n'etiti nnukwu na ọnụ ala nke ego, nkwekọrịta n'ọdịnihu ma ọ bụ ndepụta n'oge a nyere oge. Ọ na-egosipụtakwa ego efu ego.
Ịchọta ahia na-egosipụta mgbe ọnụahịa na-agbanwe n'ime ọwa ma na-eji nyocha nke ntanetị, enwere ike ịkwado ọkwa na nkwụsi ike, ikwe ka onye ahịa na-emekarị mkpebi nke ịzụta ma ọ bụ ire na ngwá ọrụ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ dị nso na ala ọwa ma ọ bụ dị nso n'elu.
Debere dị ka ọnụahịa nke otu ego na okwu nke ọzọ, ejikarị megide USD.
Emezuru P / L
Nke a bụ uru na ọnwụ na-eme site na ọnọdụ mechiri emechi.
Debere dịka nkwụghachi nke akụkụ nke ịkwụ ụgwọ mbụ maka ọrụ ụfọdụ (dịka ọrụ / ọrụ gbasara Forex).
Nlaghachi azụ na-ezo aka na ọnọdụ mgbe akụ na ụba nke obodo na-ada mbà na gị bụ nkwụsị ọrụ azụmahịa.
Nke a bụ ahịa nke a na-achịkwa, na-abụkarị site na ụlọ ọrụ gọọmentị nke na-eweta ọtụtụ ụkpụrụ nduzi na mmachibido iwu iji chebe ndị nwere ego.
Ike N'uzu nke Ịzụta Ihe
Mgbe ọnụahịa dị na mba nwere ike ịdịgasị iche maka otu ngwaahịa ahụ n'otu ọnụego kwesịrị ekwesị n'ogologo oge. Ihe ndị kpatara ihe dị iche iche nwere ike ịgụnye: ụtụ isi, ụgwọ mbupu na àgwà dị iche iche nke ngwaahịa.
Akwa oscillator, nke bụ ihe na-egosi isi. Ejiri ike na adịghị ike dị ka ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ na oge azụmahịa.
Reserve Bank nke Australia (RBA)
Nke Central Bank nke Australia.
Ụlọ akụ Central New Zealand.
Ọnọdụ ahịa nke na-eme mgbe onye na-azụ ahịa bidoro ịzụ ahịa na ọnụahịa ụfọdụ, ma onye na-ere ahịa na-alaghachi arịrịọ ahụ n'ụzọ dị iche. FXCC na-enye ndị ahịa ya ohere ịnweta mmiri mmiri Forex ECN nke ndị ahịa niile na-enweta otu ohere ahụ maka ahịa ahịa mmiri na azụmaahịa na-egbu ozugbo, n'enweghị oge ọ bụla ma ọ bụ re -quotes.
A na-akpọkarị ya "nchekwa" nke a nwere ike ịtụle: ego, ngwaahịa, ma ọ bụ ego ego ọzọ, nke ndị ọchịchị ego nwere. Ọmụmaatụ; ụlọ akụ etiti obodo nwere ike iji ihe iji kwụọ ụgwọ: nsogbu ndị ahia, na-achịkwa mmetụta nke mgbanwe FX ma kwuo okwu ọ bụla ọzọ nke ụlọ akụ etiti nwere nkwụnye ụgwọ. Nchekwa ego bụ mmiri mmiri na ozugbo n'okpuru ikike ikike ego.
Echekwara na ị ga-abụ ego nchekwa nchekwa. A na-ejikarị akụ na etiti etiti na-eme ka ego jiri ụgwọ iji kwụọ ụgwọ ụgwọ mba ụwa.
Nkwụsi Ike, ma ọ bụ Ọkwa
A na-eji ya na nyocha nhazi ma ọ bụ ọnụahịa ma ọ bụ ọkwa nke ga-egbochi mmegharị nke ọnụego mgbanwe mba ọzọ na-aga elu. Ọ bụrụ na ọkwa ahụ agbajiri, mgbe ahụ, a na-atụ anya na ọnụahịa ego ga-aga n'ihu.
Onye na-ere ahịa na ahia ọzọ - RFED
N'ọnọdụ ebe ịzụ ma ọ bụ ịzụta ngwá akụ anaghị agụnye mgbanwe ọ bụla, a chọrọ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ òtù dị iche iche iji rụọ ọrụ dị ka ndị na-akwado ndị mmadụ. RFED na-eme ihe gbasara azụmahịa ndị na-eme n'ọdịnihu, ọnụọgụ maka nkwekọrịta ahịa na nhọrọ na-akwado ndị na-erughị eru.
Ahịa ahịa na azụ ahịa
Mgbe onye na-azụ ahịa / azụ ahịa na-azụ ma ọ bụ na-ere ala, CFDs, ego, equities, wdg. N'ihi na ya onwe ya, ọ na-ewere ya dị ka onye ahịa ahịa / trader.
Ahịa Ahịa Ahịa (RPI)
Ọ bụ ụfọdụ mgbanwe nke ọnụ ahịa ahịa na ọrụ. Na mgbakwunye na CPI, RPI bụkwa ọnụ ọgụgụ nke onu oriri nke obodo.
Dika ihe omuma uba nke aku na uba nke ike na aku.
Ndị a bụ ọnụego ego ndị ahịa (site na oge na oge) jiri ọnụ ahịa nke ndị ahịa ego mee ihe iji chọpụta ma ọ bụ uru, maọbụ ọhụụ a ghọtara n'ụbọchị. A na - ewerekarị ọnụego ọnụego ahụ dị ka ọnụego mmechi nke ụbọchị ahịa mbu.
Kwekọrọ na ịjụ, ma ọ bụ nye ego nke ọnụego mgbanwe mba ọzọ. Ọmụmaatụ; na EUR / GBP ma ọ bụrụ na anyị ahụ ọnụahịa nke 0.86334 - 0.86349, aka nri bụ 0.86349. Aka nri bụ akụkụ nke onye ahịa ga-azụta na.
Debere dịka ikpughe na mgbanwe a na-ejighị n'aka, mgbanwe nke nloghachi, ma ọ bụ ihe ị ga-enwe na ọ ga-abụ ihe na-erughị atụ anya.
Mgbe ị na-ere ahịa, ndị ahịa kwesịrị ijide n'aka na ha anaghị etinye ego karịa ego ego maka ego. Isi ego na-ekwu banyere ego onye ahịa na-enwe mmetụta nke ọma na itinye ego mgbe ọ na-atụgharị uche na ụzọ ego.
A na-ewere ya dịka nyochaa ahịa ihuahịa ma chọpụta ihe ndị nwere ike ịdaba na ego ahụ, ya mere tinye usoro azụmahịa nke nwere ike inyere aka belata ihe ize ndụ nke ego ahụ.
Onodu ugwo bu uzo eji eji ugwo ma obu ugwo ugwo nke ejiji iji kwado ndi otu maka ime ihe ize ndu.
Mgbe a na-enwe ọnọdụ n'otu abalị, mmasị na-eme ebe onye ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta ego na-emeghe, dabere na ọnụego mmasị ya na ya. FXCC ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ akwụ ụgwọ akaụntụ onye ahịa ahụ dabere na ọdịiche ọnụahịa dị n'etiti ego isi ego na ego ego na ntụziaka nke onye ahịa. Ọmụmaatụ; ọ bụrụ na onye ahịa ahụ bụ ogologo ego dị ka ọnụego ehihie maka ụtụ isi ego dị elu karịa ego ego, onye ahịa ga-akwụ ụgwọ obere ego maka ọnọdụ ejidere abalị. Ọ bụrụ na ọnọdụ dị iche na-adị, mgbe ahụ, a ga-akwụ ụgwọ akaụntụ ahịa maka ọdịiche dị iche iche na ọnụego ego. Ọ bụrụ na onye ahịa nwere ogologo ego na-akwụ ụgwọ, ha kwesịrị irite uru site n'inwe ike itinye ego ma nweta ọbịbịa dị elu n'abali karịa na ha ga-akwụ ụgwọ maka obere ego na-akwụ ụgwọ.
Na-agba ọsọ na ọnọdụ
Edebere dịka omume nke imeghe oghere oghe, na atụmanya nke uru bara uru.
Nchekwa ego na ego
N'oge nsogbu ọgba aghara ma ọ bụ ọgba aghara, ọ na-atụle ego iji kwado ma ọ bụ mee ka ọnụ ọgụgụ ya baa uru.
Otu ụbọchị ahia
Debere dịka azụmahịa nke na-eme n'ụbọchị n'ụbọchị azụmahịa ahụ na-ewere ọnọdụ.
Debere dị ka atụmatụ iji obere mgbanwe na ọnụahịa. Onye ahia ahụ nwere ike ịba uru site na imepe ya ozugbo na imechi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu site na nnọkọ ahịa.
Nke a na-akọwa ọnụahịa kachasị elu bụ nke a pụrụ igbu ire ere ego n'ụdị ego. Ọ bụ iwu iji ree ahịa n'ahịa nke dị n'elu ọnụahịa dị ugbu a.
Nkwụsị ịkwụsị bụ ịkwụsị iwu ndị edebere n'okpuru ọkwa ọnụọgụ ugbu a ma anaghị arụ ọrụ ruo mgbe ọnụọgụ ahịa ahịa dị, ma ọ bụ n'okpuru ọnụahịa ịkwụsị. Kwụsị iwu ịkwụsị iwu, ozugbo ị na-emegharị, ghọọ iwu ahịa ka ị rere na ahịa ahịa ugbu a.
Ọ bụ ire ere na-abụghị nke onye na-ere ya.
Nke a bụ ụbọchị nke a ga-edozi usoro iwu nyere site na ịnyefe ngwá, ma ọ bụ ego na ego n'etiti onye na-azụ ma na-ere.
Na-achọ inwe oghere meghere nke e kere site na ire ere ego.
Ọ na - eme mgbe nnukwu ọkwa dị na ahịa ma kọwaa dịka ọdịiche dị n'etiti ụgwọ a tụrụ anya na ọnụahịa nke dị na ahịa ma jiri ya mee ihe. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-eme ka ọ bụrụ nke na-adịghị mma, ya na ndị ahịa FXCC nwere ike ịmịpụ ya, nke a makwaara dị ka mmụba ego.
Society of Internationalwide Interbank Financial Telecommunications (Swift).
A na-enyefe ego na ọrụ ego ọzọ site na Swift, dịka ọ bụ nkwukọrịta nkwurịta okwu maka mgbanwe ozi ego.
Market na-agba chaa chaa
Ihe a na - eme ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị na - azụ ahịa karịa ndị na - azụ ahịa, nke na - eduga na ọnụ ala dị ala site na njuputa nke nnyefe na - achọ.
Ọkachamara nke Onye Ọchụmnta Ego Ọzọ
Mgbe onye nwere ego nwere ahụmahụ zuru ezu na ihe ọmụma banyere ahịa ahịa ndị ọzọ, a na-atụ anya na ọ ga-enyocha ihe ize ndụ nke ohere ohere ego.
A na-ezo aka na ihe ize ndụ ahụ mgbe ọchịchị enweghi ike ma ọ bụ na-achọghị njikere ịkwụ ụgwọ ụgwọ.
Dịka ọmụmaatụ, ịzụ ahịa, ihe atụ; enweghị nkwa na ndị na-etinye ego na FX ga-enweta uru site na ahụmịhe ahụ. Ndị ahịa nwere ike ịfufe akụkụ ha dum, na-ere ahịa FX nke ukwuu. Ndị na-azụ ahịa ndị mba ọzọ na-atụgharị ego ga-etinye ego n'ihe ize ndụ, bụ nke a na-ewere dị ka isi ego dị ize ndụ, kọwaa dịka ego ọ bụrụ na furu efu agaghị agbanwe ndụ onye ahịa, ma ọ bụ ndụ ezinụlọ ha.
Ihe omume na Forex ahịa kọwara dị ka mmeghari oma ma ọ bụ na-adịghị mma na arụ ọrụ ego, nke na-adịkarị mkpụmkpụ.
Azụmahịa ndị na-ere ahịa ejiriwo rụọ ọrụ maka ego ndị e ji azụ ahịa ozugbo, a na-edozikwa iwu ozugbo, dị ka ndị na-etinye na ebe ahịa ahịa ahụ adịghị enweta ma ọ bụ napụta ego nkịtị ha na-ere.
Akara ọnụahịa / ọnụego
Ọ bụ ọnụahịa nke ngwá ọrụ nke a ga-ere ma ọ bụ zụta na ahịa ahịa.
Ọ bụ usoro iwu kwadoro maka mmezi nke azụmahịa ndị mba ọzọ ma ọ bụrụ na ụbọchị ahịa ahụ dị ka ụbọchị 2 na-aga n'ihu site na Trade Day.
Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa ndị e nyere maka ngwa ngwa (rịọ ego) na ire ere ozugbo (ọnụahịa ego) maka ego abụọ.
Ọ bụ nsogbu akụ na ụba n'ime mba ebe enwere nnukwu onu ogugu tinyere nsogbu nke enweghị oke ọrụ, na-eme ka ọganihu akụ na ụba na ịrị elu ahịa.
Ọnọdụ ahụ mgbe enweghị ọkwa na ahịa na ịzụ ahịa na ahịa dị na njedebe.
Ụkpụrụ nke a na-agbaso n'ọkwá ahịa, bụ nke yiri nke 100,000 nke ụtụ isi ego na ụzọ ahia ego. Ot'otu nke otutu bu otu n'ime ato ato a ma ama, nke ozo bu: Obere nza na otutu nza. Otu ihe nhazi bụ ụdị 100,000 nke otu ụzọ ego, obere oghere na - anọchite anya 10,000, otu nza micro na-anọchite anya nkeji 1,000 nke ego ọ bụla. Otu nkedo otu-pip maka otu ihe nzaba kwekọrọ na mgbanwe 10.
A na-akọwa usoro ọgwụgwọ dịka ụdị iwu ego, nke otu ụlọ akụ etiti na-egbochi mmetụta nke nkwụsị na isi nke isi ego na ego ụlọ. Nchọpụta ọgwụ gụnyere ịzụta ma ọ bụ ịzụta akụnụba akụ site n'aka ụlọ akụ etiti, mmetụta nbibi nke mgbasa ozi mba ọzọ. Usoro ntinye ọgwụgwọ na-emepụta uru nke ụlọ ahịa ego na-emetụta onye ọzọ, a malitere ya n'ahịa ahịa ndị ọzọ.
British paụnd, nke a ma ama dị ka cable mgbe ị na-azụ ego GBP / USD.
Stochastic (Stoch) gbalịrị ịhazi ihe dị ka pasent n'etiti 0 na 100. N'okwu ndị siri ike, a na-echepụta usoro abụọ, usoro ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ bụ ihe na-ewu ewu na-egosi na ndị ahịa na-eme ihe ike.
Kwụsị Ụkwụ Ụgwọ
Nke a bụ ihe dị iche iche nke onye ahịa ga-eji mechie ọkwá ma ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ na-agagharị na nke ọzọ site na ụfọdụ pips. N'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-egbu iwu ọnwụ ma ọ bụrụ na ahịa ahụ eruo, ma ọ bụ gafee ọkwa nkwụsị nke onye ahịa ahụ. Ozugbo e nyere ya, a ga-edebe usoro ịkwụsịtụ ruo mgbe ego ruru. Akwụsịrị iwu iwu iji mechie ọnọdụ (kwụsị ọnwụ), iji weghachite ọnọdụ, ma ọ bụ mepee ọnọdụ ọhụrụ. Ihe kachasị mee ihe iji kwụsị ọrụ bụ iji chebe ọnọdụ dị ugbu a (site n'ịkwụsị ọnwụ, ma ọ bụ chebe uru ndị a na-enwetaghị aha). Ozugbo ahịa merụrụ, ma ọ bụ na-aga site na nkwụsị ahịa, a na-arụ ọrụ (triggered) na FXCC ga-emezi iwu ahụ na ego ọzọ dịnụ. Kwụsị iwu adịghị ekwe nkwa ikpochapụ na ọnụahịa ịkwụsị. Ọnọdụ ahịa na-agụnye ọdịda na ụda olu nwere ike ime ka a kwụsị igbu ya na ọnụahịa dị iche na iwu.
Kwụsị onu ogugu
A na-akọwa nke a dịka ụgwọ ebe onye ahịa batara ọnụahịa nke na-eme ka usoro nkwụsị kwụsị.
Enweghị Ọrụ Na-arụ
Mgbe n'ime akụ na ụba, enwere ọrụ na-adịte aka nke na-adịte aka, a na-akpọ ya ọrụ na-enweghị ọrụ. Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ n'ihi isi ihe na-agbanwe na akụnụba nke ọtụtụ ihe, dị ka nkà na ụzụ, asọmpi na iwu gọọmenti.
A na-eji ha nyocha nyocha iji gosipụta ọkwa maka ihe bara uru ebe a na-atụ anya na ọnụahịa ga-enwe ihe isi ike ịghaghasị ma ọ ga-emezi onwe ya.
Akwụsị ego bụ ịgbazinye ego na ịgbazinye otu ego nke ego a gbanyere ego na ọnụego mgbanwe ọnụahịa.
Nwepu / Sweeping
Mgbe onye ahịa nke FXCC nwere P / L na ego ọzọ karịa dollar US, a ghaghị ịgbanwe P / L ná ngwụsị nke ụbọchị azụmahịa ọ bụla n'ime dollar US, na ọnụego mgbanwe na-enwe n'oge ahụ (a maara dịka ọnụego mgbanwe ). A na-akpọ usoro a ikpochapu. Ruo mgbe P / L kpochapụrụ, ọnụahịa akaụntụ onye ahịa ga-agbanwe ngwa ngwa (elu ma ọ bụ ala), dị ka ọnụego mgbanwe maka uru na ọnwụ na mgbanwe ego. Ọmụmaatụ; ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere uru na yen, ọ bụrụ na yen adaba mgbe ọnọdụ ahụ mechibidoro, mana tupu enwetata ego ahụ na dollar, ego akaụntụ ahụ ga-agbanwe. Ngbanwe ahụ bụ nanị na uru / ego nkwụsị, ya mere mmetụta dị ntakịrị.
Society maka Interbank International Interface Telecommunications bụ ụlọ ọrụ nke Belgium nke na-enye netwọk kọmputa zuru ụwa ọnụ maka imezi nke ọtụtụ azụmahịa mgbanwe. Ọha na-ahụ maka ịhazi Ụkpụrụ koodu ego maka usoro nkwenye na njirimara (ie USD = US Dollars, EUR = The Euro, JPY = Japanese Yen)
Nke a bụ ụdị nsụgharị atụmatụ aghụghọ nke na-ejide ọkwá na-emeghe site na otu (ruo ọtụtụ ụbọchị) na mgbalị iji nweta uru site na mgbanwe mgbanwe, nke a na-akpọkarị 'swings'.
Ahịa ahia maka Switzerland Franc, CHF.
Were Order Uru
Ọ bụ ntụziaka nke onye ahịa ahụ nyere ọnụahịa na-akọwapụta na ozugbo ahịa ahịa ruru ọkwa dị mkpa, a ga-emechi iwu ahụ. Ozugbo iwu ahụ ruru, ọ ga-eweta uru maka ahia ahụ.
Nkà na ụzụ na-eji ọnọdụ ahịa akụkọ ihe mere eme na usoro ihe atụ iji gbasaa atụmatụ nduzi.
A kọwapụtara ya dị ka ihe a na-eme n'ahịa ahịa ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe kpatara ihe kpatara ya. Otu ihe atụ ga-abụ mgbe ụgwọ ahụ laghachiri nkwụsị siri ike mgbe ọ na-etisasị ya.
Njikọ dị n'etiti ọnụahịa ego mbupụ na mba mbubata.
A na-eji akaebe nka eme ihe iji mee ka ịkọ ọdịnihu ahịa ahịa. Ọ bụ akụkụ dị oké mkpa nke nyocha nke nyocha dị ka ụkpụrụ eserese ma haziri maka nyochaa mmeghari ego ọnụ oge.
A kọwapụtara ya dị ka ahịa ebe ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-azụ ahịa adịghị, nke a na-akpata obere ego ahịa na ọnụ ọgụgụ ego nke ngwá ahịa ndị ahịa.
A kọwara nke a dịka mgbanwe kachasị elu na ọnụahịa, elu ma ọ bụ ala.
Echi na-esote (Tom ọzọ)
Echi na-esote ọnọdụ ndị mechibidoro n'otu ụbọchị azụmahịa n'ụbọchị ngwụcha ọnụ ma weghachiteghachi n'echi ya. Nnyefe ahụ bụ ụbọchị abụọ (2) mgbe ụbọchị azụmahịa gasịrị. Ọ bụ ịzụ ahịa na ire ere nke otu ego iji zere ọ bụla nnyefe ego ahụ.
Akụkọ banyere arụmọrụ ahịa, nke a na-ekwukarị dị ka usoro ọmụmụ.
Nke a bụ ụbọchị a na-arụ ahịa.
Akwụsị ahịa na-eme mgbe mba dị mkpa karịa mbupụ. Ọ bụ akụnụba akụ na ụba nke nkwụsị ahịa ahịa na-ezighị ezi ma na-achọpụta ego nke ego ụlọ n'ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Ịzụta ma ọ bụ ire nke ngwaahịa, ọrụ na ngwá ọrụ na ndị ọzọ. Enwere ike ịkọwa ahịa ahịa Forex dị ka nkọwa banyere mgbanwe na ọnụego nke ego ala ọzọ.
Ụlọ ahịa ahia
A na-amarakwa ọkwa azụmahịa dị ka 'ịkwapụta ihe'. Ọ bụ ebe a na-ere ma na-azụ ahịa na-ewere ọnọdụ na a pụrụ ịchọta na akụ, ụlọ ọrụ ego, na ihe ndị ọzọ ọ nwere ike inye ndị ahịa ngwa ngwa iwu ha.
Ngwa ngwanrọ ebe onye ahịa nwere ike inye iwu ka i gbuo azụmahịa na onye ahịa. FXCC-MT4 (MetaTrader 4) bụ ihe atụ nke ikpo okwu azụmahịa.
A na-eji nkwụsị nkwụsị iji chekwaa uru ndị a nwetara site na ahia ụfọdụ site na ịnọgide na-azụ ahịa wee mepee ma na-ekwe ka ị nweta uru (uru) ọ bụrụhaala na ọnụahịa ahụ na-agagharị na ntụziaka a chọrọ. A naghị etinye ya na otu ego kama ọnụego a kapịrị ọnụ.
Nke a bụ ịzụ, ma ọ bụ ire nke, dịka ọmụmaatụ, ego mgbanwe mba na-esi na mbibi iwu.
Nke a bụ ụgwọ nke ịzụ, ma ọ bụ na-ere ngwá ọrụ ego.
Nke a bụ ụbọchị nke ahia na-eme.
Mgbe ụlọ ọrụ na-ekere òkè n'ahịa ahia ụwa, ihe ize ndụ ha na-eche ihu bụ nkwupụta azụmahịa, ọ bụrụ na ọnụego mgbanwe ego ga-agbanwe mgbe ụlọ ọrụ ahụ batara n'ime ego.
Ntuziaka nke ahịa ma ọ bụ ọnụahịa ahụ, na-ejikarị okwu ndị a: "bullish, bearish, ma ọ bụ n'akụkụ" (nke dị) na nke nwere ike dị mkpirikpi oge, ogologo oge ma ọ bụ usoro.
Nke a bụ ụdị nyocha nke nyocha (ihe ngosi), nke a na-akpọkwa regression. Usoro ndị a na-emepụta nwere ike ịrụ ọrụ dịka ngwá ọrụ statistical dị mfe, na-achọpụta ihe ndị dị site na ịkpa nkata nke kachasị mma n'ofe: kasị elu, elu, ma ọ bụ mmechi ma mepee ọnụahịa.
Ọdịiche yiri ntụgharị olu ahụ ma gosipụta ọnụ ahịa ego niile nke azụmahịa niile e gburu n'ime oge a kapịrị ọnụ.
Ọnụ ego abụọ
Ọ bụ ọnụego nke na-egosi ọkwa ahụ ma rịọ ego n'ahịa ahịa ndị ọzọ.
Ebe a na-ekpuchighị ya
Ọ bụ okwu maka oghere.
Mgbe ọnụego mgbanwe maka ego dị n'okpuru ikikere ikike ịzụta ihe, a na-ewere ya dị ka ihe efu.
enweghị ọrụ ọnụego
Pasent nke ndị ọrụ mmanye nke na-anọghị n'ọrụ ugbu a.
Ọ bụ oge maka uru efu ma ọ bụ nkwụfu enyere na ọnụego mgbanwe ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ kpebiri ịbanye maka ụdị ego ọ bụla, ọ ga-ere ya na ego ọnụahịa na P / L a na-edeghị aha ruo mgbe e mechiri ọkwa ahụ. Ozugbo e mechibidoro, P / L ga-agbakwụnye ma ọ bụ wepụlata ego fọdụrụ na nkwụnye ego, iji nweta ego ọhụrụ na ego nkwụnye ego.
Nke a bụ ọnụahịa ọhụụ ọhụrụ nke dị na ọnụahịa dị elu karịa ọnụego bu ụzọ.
US Prime ọnụego
Ọnụ ụtụ mmasị nke United States na-eji ego nye ndị ahịa ha ma ọ bụ ndị ahịa ahịa.
Nke a bụ ọmịiko dị na United States nke America, nọchiri anya USD mgbe ọ na-eduzi azụmahịa azụmnta ego.
USDX, Index US Dollar
The dollar index (USDX) na-atụle uru nke US dollar na uru nke a nkata nke ego nke United States nnukwu ahịa trading. Ugbu a, a na-agbakọta ndeksi a site na ịba uru na ọnụego mgbanwe nke isi ego isii kachasị mkpa: euro, Japanese jen, dollar Dollar, British pounds, Swedish krona na franc franc. The euro nwere ihe kachasị njọ na dollar na ndepụta, na-eme 58% nke uru bara uru, yen na 14% nọchiri ya. Ntọala ahụ malitere na 1973 na isi nke 100, ụkpụrụ ebe ọ bụ na ọ bụ na-agbakwunye na isi a.
Ọ bụ ụkpụrụ ndị ọkachamara nyocha na-ezo aka, ebe a na-ele ya anya dịka ihe mgbaàmà nke ngbanwe na-agbanwe agbanwe.
Ụbọchị Bara Uru
Ọ bụ ụbọchị mgbe mgbanwe nke ịkwụ ụgwọ n'etiti ndị otu nke azụmahịa azụmahịa na-ewere ọnọdụ. Ụbọchị ntozuzu nke azụmahịa azụmahịa na-abụkarị ụbọchị azụmahịa (2) site na mgbe etinyere ọnọdụ ahụ.
VIX bụ akara akara maka CBOE Volatility Index, nke a na-ahụkarị nke volatility nke SPX ndenye nhọrọ; VIX na-agbakọ site na Exchange Board Options Exchange (CBOE). Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ VIX dị elu, ndị ahịa na ndị ahịa kwenyere na omenala nke ahia na-ebuli elu; na isi ahia ntaneti nwere ike ịbụ na oge mgbanwe. VIX na-enye anyị otu ụbọchị iri atọ nke nhazi ọkọlọtọ nke afọ ọ bụla na SPX. Dịka ọmụmaatụ, ịgụ 20% ga-atụ anya na 20% gafere, elu ma ọ bụ ala, n'oge ọnwa iri na abụọ sochirinụ.
Debere dị ka ọnụahịa nke mgbanwe ọnụahịa, nke a nwere ike tụọ site n'iji ntughari dị iche ma ọ bụ ọdịiche n'etiti nlọghachi nke ngwa ahụ.
Nchịkọta nke ọnụahịa zuru ezu nke ịzụ ahịa nke otu: nha nha, ụzọ ego, nnweta, ma ọ bụ ndepụta. Mgbe ụfọdụ, a na-ewerekwa ya dịka ọnụọgụgụ nke nkwekọrịta na-ere n'ụbọchị.
Akpọrọ dịka "ihe nkesa onwe nke ọma". Ịnwere ike ịbanye na ntanetị dị ntanetị, nke na-enye ohere ka ndị ahịa zụọ ma rụọ ọrụ EAs ha nke ọma, na-enye ha ohere ịzụta 24 / 5 na mbelata ala, n'enweghị mkpa ka kọmputa ha dị na ya. Ọrụ site na FXCC bụ site BeeksFX.
Ụkpụrụ Chart nke Wedge
Ụkpụrụ a na-egosi ntụgharị nke a na-emekarị, nke a na-eme ugbu a n'ime obere osisi. Mgbaji dị ka ọdịdị triangle, inwe nkwado na usoro ndị na-eguzogide. Ụkpụrụ chaatị a bụ usoro ogologo oge nke gosipụtara ọnụọgụ ego.
Achọpụtara dịka ọnọdụ nke ahịa dị oke ahịa, nke na-eme ka ngwa ahia dị oke egwu gbasaa ngwa ngwa.
Ọ na-anọchi anya ihe omume mgbe a na-agbaziri ego n'ọtụtụ buru ibu site na ụlọ ọrụ ego na ụlọ akụ, kama obere ego kpọmkwem site na ndị obere ego.
Ọ bụ ọnụahịa nke nkata ngosipụta nke ngwongwo ndị dị n'ụsọ na ntụgharị nke mgbanwe nke ọnụ ahịa na nhazi na nkesa nke akụ na ụba. Ọtụtụ mgbe, na-eduzi ntụgharị ọnụahịa ndị ahịa site na 60 ruo ụbọchị 90. A na-edekarị nri na ụlọ ọrụ mmepụta aha iche iche.
Otu ubochi mgbe anoghi n'ulo akwukwo ego ka emeghe ahia, ka ihe atu, ezumike ego n'ulo oha na United States, dika usen ekele.
Ọ bụ òtù ego nke mba ụwa gụnyere ndị òtù IMF ndị nyere aka na mmepe nke mba ndị otu site n'ịgba mgbazinye ego ebe isi obodo ha dị.
A maara dịka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ihe ego.
A na-ejikarị eji otu ijeri mee ihe.
Edebere dịka nloghachi azụ ego.
Ọ bụ akara nke na-eme atụmatụ ọnụego ndị a na-ahụ maka oge ụfọdụ ebe ngwá ọrụ nwere akara ngosi otu ma dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo oge. A na-eji ya na-enye echiche maka ọrụ akụ na ụba nke a na-atụ anya n'ọdịnihu, yana mgbanwe mgbanwe ọnụ.
Kwa afọ. Ntughari eji eme ihe maka ichikota ngbanwo onu ogugu n'ime uzo kwa afo.